မောငျမညှောငျ့နဲ့ မ ဆောငျ့မယျ – My Blog
မောငျမညှောငျ့နဲ့ မ ဆောငျ့မယျ (စ/ဆုံး)
“အာနိုးရေ….ဟေ့ အာနိုး…”“ လာပွီ….အမရေ…”နှားစာစငျးနသေော အာနိုးအိမျဘေးမှ မပွေးရုံတမယျလာခဲ့ပွီး….အိမျပျေါသို့ လှမျးတကျလိုကျတော့ မခငျအေးနှငျ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျမိသညျ။“ နငျ့ ဦးလေးလညျး ပိုကျတဲရောကျရငျွဲပနျမလာတော့ဘူး…နငျ့ပဲခိုငျးရမှာပ…ညနစေောငျးရငျ မိုးရှ့ ပွနျလာမယျ့ပုံမပျေါဘူားလိမျ့မယျထငျတယျ….နငျ…နှားတှသှေားသိမျးခတြေော့…နငျ့ ဦးလေးကတော…..”“ အခုပဲ သှားလိုကျတော့မယျ….အမ….”အာနိုးက အိမျရှမေ့ကျြနှာစာ သံဇကာတှငျခြိတျထားသော ခမောကျကို ဆှဲပွီး ထှကျသှားဆောငျးသညျ။
မခငျအေး အိမျပေါကျဝမှရပျကွညျ့ရငျး ပွုံးမိသညျ။ အာနိုငျးက ဖငျပေါ့သညျ။ သိတတျသညျ။ သညျလိုသူရငျးငှားမြိုးရထားတာ သူ့တို့အဖို့ကံကောငျးလှသညျ။ ပွီးတော့ အာနိုးက တဈကောငျကွှကျ မခငျအေး ၏ယောကျြား ကိုသနျးငှေ၏ အဖေ မခငျအေး၏ယောက်ခမအိမျတှပွီးငျ ငယျငယျထဲက နလောကိုသနျးငှေ့ သူတို့ဆီလာပွီး သူရငျးငှားလုပျနတောဖွဈသညျ။နှငျ့ မခငျအေး အိမျထောငျကတြောအသကျက (၁၅)နှဈခနျ့သာရှိသေးသျောလညျး အာနိုးဆိုသော နာမညျရအောငျ သူ့ခန်ဓာကိုယျက ထှားကွိုငျးလှသညျ။ အခု ကိုသနျးငှနှေငျ့ မခငျအေးတို့ အိမျထောငျကပြွီး (၂)နှဈခနျ့အတှငျးမှာပငျ အာနိုး တျောတျောထှားလာသညျ။
ဒီနှဈဆို ထှနျတုံးတောငျနိုငျနခေပြွေီ။ မခငျအေးတို့တှငျ လယျဧက (၂၀)ကြျော ရှိသညျ။ လယျတှထှေနျတုံးပိတျကတညျးက မခငျအေး၏ယောကျြား ကိုသနျးငှကေ ပိုကျထဲသို့ စတဲခနြေ သညျ။ ဒီနှဈ ခြောငျးရိုးတှ့ငျ လိုငျစငျရသူက ကိုသနျးငှေ၏ သူငယျခငျြး။ ဒီတောကိုသနျးငှေ တဈယောကျ အရကျပေါ၍ ပုစှနျရှေ့။ အိမျမှာက သူ့သူရငျးငှား အာနိုးကိုး ငါးရှေး မိနျးမတှမြေားသညျ့ ပိုကျထဲမှ မပွနျတောယုံကွညျစိတျခတြာလညျးပါသညျ။ သူကိုယျတိုငျက ပြျောပြျောပါးပါးနတေတျတာလညျး ပါသညျ ပေါ့။ကိုသနျးငှကေ အသကျ(၃၀)ခနျ့သာရှိသျောလညျး အာနိုးက ငယျငယျထဲက အတူနလောသူမို့ နှုတျကြိုးပွီး ဦးလေးဟုသာချေါသညျ။
မခငျအေးကတြော့ အသကျ(၂၇)နှဈတောငျရှိနပွေီဖွဈပမေယျ့ အမ ဟုသာသူကချေါလသေညျ။ အိမျမှ ကှငျးထဲသို့ထှကျသှားသော အာနိုးတဈယောကျ မွငျကှငျးထဲမှ ပြောကျ သှားတော့မှ မခငျအေးက အိမျထဲသို့လှမျးဝငျရနျ ကွံလိုကျရငျး ကောငျးကငျသို့မော့၍ ကွညျ့လိုကျမိသညျ။ တောငျဘကျဆီမှ မိုးရိပျတို့က တကျစပွုနပွေီ။ သူမ အာနိုးကိုလှတျလိုကျသညျမှာ မှနျသှားသညျဟုတှေး ရငျး မခငျအေးသညျ အိမျပေါကျဝသံဇကာတံခါးကိုပိတျကာ အိမျထဲသို့ပွနျ၍ ဝငျခဲ့လသေညျ။ရှာမှနေ၍ကွညျ့လြှငျ တဈပွလောကျအကှာတှငျ တောတနျးလေးတဈခုရှိသညျ။ထိုတောတနျးလေးပတျလညျတှငျ စားကကျြကောငျးသဖွငျ့ ရှာမှကြှဲနှားမြားကို လှတျကွောငျးထားလရှေိ့သညျ။
အခုလညျး အာနိုးတဈယောကျ ထိုတောတနျးလေးသို့ ရှရှေု့၍ လယျကှငျးမြားကိုဖွတျကာ လြှောကျလာခဲ့၏။ “ ဟောဟိုရှမှေ့ာ….ဒီဖကျပွနျလာနကွေတာ….အိမျက ကောငျတှလေားမသိဘူး….” လမျးခုလတျအရောကျ နှားတဈစုပွနျလာနသေညျကို တှလေို့ကျရသညျ။ “ ဟုတျတာပေါ့….အိမျကကောငျတှပေဲ…” ထိုအခိုကျ မိုးကတဖွောကျဖွောကျကလြာသညျ။ နှားသိမျးဖို့တော့ မလိုတော့ဘူး။ မနကေ့ဦးလေး ကိုသနျးငွှပွေီးခူးလိုကျအုံးမှပ….ဲမှိုစားခငျြတယျပွောတယျ…။ ကုံတုနျး သှားအာနိုးတဈယောကျ ရှတှေ့ငျမဝေးတော့သော တောတနျးလေးဆီသို့ဆကျ၍လာခဲ့သညျ။ ထိုအ ခိုကျ မိုးကသညျးထနျစှာရှဲပွီးတောလာသညျ။
အာနိုးတောတနျးလေးသို့ အရောကျလာခ့သညျ။့ သူမိုးခို နကြေ ညောငျခေါငျးပေါကျကွီး ရှိရာသို့ အပွေးအလှားလာခဲ့သညျ။ မိုးက တမိုးလုံးမဲမှောငျပွီး သဲသထကျ သဲလာသညျ။“ ဟငျ…ငါ့ အရငျ ဘယျသူရောကျနတောလဲ….”ညောငျပငျအခေါငျးပေါကျကွီးရှိရာသို့ လှမျး၍အမွငျရတှငျ လူတဈယောကျ ငုတျတုတျလေးထိုငျနေ သညျကို မိုးထဲလထေဲတှငျ မသဲမကှဲ့မွငျလိုကျရသညျ။တှေ“ ဟငျ…..ထှေးထှေး….” “ ဟငျ….အာနိုး….” “ နငျ….ဘာလာလုပျတာလဲ….” “ ငါ မှိုလာခူးတာ….မိုးတှေဲသဲလာလို့ မပွနျနိုငျတော့တာ….ဒီမှာတကိုယျလုံးလညျး ရှနပွေီဟာ…. ခမျြးလိုကျတာ ” ထှေးထှေးက မေးရိုကျသံလေးဖွငျ့ ပွောသညျ။ ထှေးထှေးတို့တဲက တောတနျးလေးနှငျ့ ရှာအကွား ကှငျးထဲတှငျရှိသညျ။
တောတနျးလေးမှဆိုလြှငျ တချေါလောကျသာဝေးသညျ။“ အီး….ဟီး….ခမျြးလိုကျတာ အာနိုးရာ…”ထှေးထှေး တကိုယျလုံး ခိုကျခိုကျတုနျနသေညျ။ အာနိုး ထှေးထှေးကို သခြောကွညျ့လိုကျသညျ။ တကိုယျလုံးရှဲရှစိုနေ၍ အဝတျအစားမြားက တကိုယျလုံး ကိုယျတှငျ ကပျနသေညျ။ ထှေးထေးမှာ သူမ၏ လုံးလုံးတဈတဈ ခဈြစရာကိုယျလုံးလေးမှာ အတိုငျးသားလှပလကျြရှိသညျ။“ အား….ဟီး….ဟီး….လုပျ….လုပျပါအုံး….အာနိုးရ….ငါ…ငါ…ခမျြးလိုကျတာ…..အီး….ဟီး….”အာနိုး ဘာလုပျရမှနျးမသိ…ခွမေကိုငျမိ လကျမကိုငျမိ ဖွဈနသေညျ။“ နငျ့ အဝတျတှခြှေတျပွီး ညှဈ လိုကျရငျကောငျးမယျ….” “ ဟာ…..နငျ…..နငျ ကလဲ…”
ထိုအခိုကျ လကေလညျး ကွမျးလာသညျ။ “ အာ…နိုး…အမလေး….ဟီး…ဟီး….ခမျြးလိုကျတာ….လုပျ….လုပျပါအုံး….” မထူးတော့ပွီ“ ကဲ….နငျ မကျြစိတှေ မှိတျထားလိုကျ….”ထှေးထှေးကလညျး ဘာမှစဉျးစားမနတေော့….မကျြလုံးအစုံကို မှိတျခလြိုကျသညျ။ အာနိုး ထှေးထှေး၏ အဝတျအစားတှကေို ခြှတျသညျ။ အဝတျတှရေညှေဈရငျး အဝတျအစားတအေားလုံးကတျြ သှားသော ထှေးထှေးကို ကွညျ့ကာ အာနိုးတဈယောကျ စိတျတှဖေောကျပွနျလာသညျ။ ထှေးထှေး၏ ထိပျ ကလေးတှေ နီနသေော နို့လေးနှဈလုံးက လိမ်မျောသီးခပျရှပွီးတော့ ထှေးထှယျေရှယျလေးတှလေောကျရှိ၏။း၏ ပေါငျနှဈလုံးကွားမှ စိမျးမွမွ အမှေးလေးတှနှေငျ့ တောငျပူစာခုံးခုံးလေး….နှုတျခမျး နှဈခုက စကေ့ပျ၍ တငျးနသေညျ။
“ဟငျး….ဟငျး….ခမျြး….ခမျြးသေးတယျ….”“ ငါ…ငါ…ဖကျထားမယျ….”အာနိုး ထှေးထှေးကို ဘေးမှထိုငျ၍ ဖကျလိုကျသညျ။ ဗလကောငျးသော အာနိုး၏ ရငျခှငျထဲတှငျ ထှေးထှေး၏ ကိုယျလုံးလေးမှာ ပြောကျလုမတတျဖွဈနေ၏။ အသားခငျြးထိလိုကျရတော့ အာနိုး၏ သှေး တှကေ ဆူသထကျဆူပှကျလာသညျ။ အာနိုး၏ ရငျခှ့ ထှေးထှေးမှာ ခမျြးတာတော့ငျထဲရောကျသားတောနညျးနညျးသကျသာသှားသညျ။ ဒါပမေယျ့ အာနိုး၏ ပေါငျနှဈလုံးကွားမှ အခြောငျးကွီးက သူမ၏ ပေါငျရငျး တှငျ တငျကာ ဆီးခုံကို ကနျ့လနျ့ဖွတျထိ၍နသေညျ။ ယားတတျသော ထှေးထှေိဖွဈနေ၏။ ခး ယားကြိကဏြအကွာ ဘာကွောငျ့မှနျးမသိ ထှေးထှေးတဈယောကျ ဒီအခြောငျးကွီးကို ပို၍ထိခငျြသညျ့သဘောဖွငျ့ သူမ၏ ခါးလေးကို ပို၍ဖိကပျပေးမိသညျ။
အတှအေ့ာရုံက နှဈယောကျစလုံးကို တနရောတညျးတှငျ ထိနျး ခြုပျထားလိုကျပွီ။“ ထှေးထှေး….ခမျြးသေးလား….”“ အငျး….နညျးနညျးတော့ ခမျြးသေးတယျ….”အာနိုး ထှေးထှေးကို ပွငျဖကျရနျအတှကျ ကိုယျခငျြးခှာလိုကျရာမှ ငုံ့ကွညျ့မိလိုကျတော့ ထှေးထှေး၏ ကိုယျလုံးအရှဖွေဈသားသော နို့လေးနှဈလုံးက အာနိုး၏ မကျြလုံးထဲမှနေ၍ ခန်ဓာကိုယျတ့ လှုပျကနှဲငျး ထှိဝငျ၍သှားသညျ။ အာနိုး သတိလကျလှတျဖွဈကာ ထှေးထှေး၏ နို့လေးတဈလုံး ကို ငုံ့၍စို့ပဈလိုကျ သညျ။“ အာ…..နငျ…..နငျ….ဘာ….ဘာလုပျ….”ပွောသာပွောသညျ…ထှေးထှေးက မရုနျးဖယျ…သူမပွောလိုကျကာမှ အာနိုးက ပို၍ဖိစုပျလိုကျ သညျ။“ အာ….ဟေ့….အ….”ထှေးထှေးရငျဘတျလေးကော့တကျသှားသညျ။ စောစောက ခမျြးတာတှေ ဘယျရောကျသှားမှနျး မသိဘဲ တကိုယျလုံးဖွိုးဖွိုးဖငျြးဖငျြးဖွဈကာ တဖွေးဖွေးနှုံးကလြာသညျ။ အာနိုးကလညျး ခသေူမဟုတျပါ။
လကျတှမေ့ရှိပမေဲ့ ရှာလယျက တိုးလှိုငျတို့ဗှီဒီယိုရုံတှငျ သနျးခေါငျလောကျမှပွသညျ့ နိုငျငံခွားအပွာကား တှကေို ခဏခဏကွညျ့ဖူးထားသူဖွဈသညျ။အာနိုးက သူမ၏နို့လေးနောကျတဈလုံးကို ပွောငျး၍အစုပျ ထှေးထှေးက အာနိုး၏ကိုယျလုံးကွီးကို ပွနျဖကျထားလိုကျမိသညျ။ ပွီးတော့ သူမ၏ ဆီးခုံကိုလာ၍ ထောကျနသေော အာနိုး၏ ဟာကွီးကလညျး တဆတျဆတျခုံးထနသေညျကို ထှေးထှေးသတိထားမိသညျ။ အပြိုမလေး ထှေးထှေးကလညျး လကျတှေ့ မရှိပမေယျ့ အဖနေဲ့အမတေို့ အဝှါပွုကွတာကို မကွညျ့ခငျြမွငျလကျြသား မကွာခဏတှမွေ့ငျခ့ဖူးသူဖွဈဲသညျ။အာနိုး ထှေးထှေးကို ပကျလကျလှနျလှဲလိုကျသညျ။ ပွီးတှော့ သူ့ပုဆိုးကို ခတျြအခြ ထှေးထှေးကပေါငျနှဈလုံးကို ထောငျလိုကျသညျ။
အာနိုး ဒူးထောကျ၍ ဝငျကာ လီးကို နှုတျခမျးနှဈခုကွား တေ့၍ဖိခြ သညျ။“ အမေ့….အီး….အာနိုး….မလုပျ….မလုပျပါနဲ့ဟာ….”ပွောနပေမေယျ့ ထှေးထှေး၏ပေါငျနှဈလုံးက ပို၍ကားသားသညျ။ တဈကွိမျလညျးမဝငျ နှဈကွိမျ လညျးမဝငျ အာနိုး၏စိတျတှကေ ထရုံမဟုတျ ကွမျးလာသညျ။ ထှေးထှေး၏ စကေ့ပျနသေော စောကျပတျ နှုတျခမျးသားနှဈခုကို ဖွဲကာ ဟသှားတော့ လီးကိုတပွေီ့း အတငျးဖိခလြိုကျသညျ။“ ဗွဈ….ဗွဈ….အမလေး….သပေါပွီ…အငျ့….အီး….ဟီး….”နာလှနျး၍ ထှေးထှေးငိုခလြိုကျသညျ။ သူမ၏ အသားလေးတှေ တဆတျဆတျတုနျနသေညျ။ နှဈယောကျစလုံး မသိသညျ့အခကျြကတော့ ထှေးထှေး၏ စောကျပတျနှုတျခမျးအောကျစပျလေး တဈ လကျမလောကျ ကှဲပွီး သှေးတှထှေကျလာသညျ။
ဒါတငျမဟုတျ ထှေးထှသှေားး၏ စောကျခေါငျးထဲမှ လညျး သှေးလေးတှစေီး၍ ထှကျလာသညျ။ တကိုယျလုံးတဆတျဆတျတုနျကာ ငိုနသေော ထှေးထှေးကွောငျ့ အာနိုးတဈယောကျ ဘာလုပျရ မှနျးမသိအောငျ ဖွဈသှားသညျ။ ထှေးထှကွေီးကို ဖိကပျး၏ စောကျခေါငျးထဲသို့ တဆုံးဝငျနသေော လီးထားလိုကျပွီး ထှေးထှေး၏ ကိုယျလေးကို ငုံ့၍ ဖကျထားလိုကျသညျ။ ခဏတာငွိမျပွီးနလေိုကျတော့ နာကငျြတာတှပွေီး ပူနှေးတောငျ့တငျးသနျမာလှသော လီးကွီး၏အတှကေ့ ပို၍လာသညျ။လြော့သှားအာနိုးမှာလညျး တဆုံးမွှုပျနှံထားသော လီးကွီးကို ပတျလညျကွပျညပျ၍နသေော စောကျပတျ သားနုနုလေးမြားက ဝိုငျးဝနျးဆုတျနယျပေးသလို ဖွဈလာသောကွောငျ့ မရိုးမရှဖွငျ့ မနနေိုငျဖွဈလာပွီး လီး ကွီးကို ဆှဲဆှဲထုတျပွီးဆောငျ့သညျ။
“ ဗွဈ….ဗွဈ….ပလှတျ….ဖှတျ…..အမေ့…..အား…..အမေ့….”ထှေးထှေး၏ ကိုယျလုံးလေး တသိမျ့သိမျ့ဖွဈနသေညျ ကြှမျးကငျြမှုမရှိသေး၍ အာနိုးက လီးကို တဆုံးထုတျ၍ မဆောငျ့ဘဲ လကျနှဈလုံးလောကျ တဝကျလောကျ ထုတျ ထုတျပွီးဆောငျ့သညျ။ ဘယျလိုပဲ ဖွဈဖွဈ လီးကရှတေို့းနောကျငငျဖွငျ့ ရှလြေ့ားနလေတေော့ လီးခြောငျးကွီးတဈခုလုံးက စောကျပတျအ တှငျးသားလေးတှကေို တောကျလြှောကျပှတျတိုကျ၍နသေဖွငျ့ နှဈယောကျစလုံးအရသာထူးနကွေသညျ။ကိုယျလုံးလေးတသိမျ့သိမျ့ဖွဈကာ ရှတေို့းနောကျငငျဖွငျ့ တလှုပျလှုပျဖွဈနတေော့ ခန်ဓာကိုယျ အ ပျေါယံမှ နို့အုံလေးနှဈလုံးက ယမျးခါ၍နသေညျ။
လုပျရမှနျးသိ၍တော့မဟုတျ အာနိုးကထှေးထှေး၏ နို့အုံ နှဈဖကျကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ လှမျးဆှဲသညျ။ နို့သီးရဲရဲလေးတှကေို လကျညှိုးလကျမတို့ဖွငျ့ ညှပျကွညျ့ သညျ။ အဆောငျ့ကလညျး မပကျြပေ။ ဘယျအရာနှငျ့မြှမတူအောငျ အရသာထူးနသေူက ထှေးထှပွေငျးကွားကး။ တဟငျးဟငျး အသကျရှုသံပွငျး တှခေ့ငျြဇောဖွငျ့ အာနိုးကို မကျြလုံးလေး ဖှငျ့ ဖှငျ့ကွညျ့ပွီး မကျြလုံးလေးလညျကာ ပွနျမှိတျ မှိတျသှားသညျ။ ခံစားရခကျလာတော့ ထှေးထှေးတဈယောကျ ခါးလေးကော့ကော့တကျလာသညျ။ လီးကို တဝကျလောကျ တဝကျလောကျ ထုတျ ထုတျပွီး ဆောငျ့နရေတာ အာနိုး စိတျထဲသိပျပွီး အားမရခငျြတော့ ပေ။အာနိုးတကိုယျလုံးလညျး ဆိမျ့၍ အရသာရှိလှသညျ။ အာနိုး သူ့လီးခြောငျးကွီးကို အဆုံးနီးပါး ထုတျ၍ ဆောငျ့သညျ။
ထိုသို့ဆောငျ့လိုးလိုကျတိုငျး ထှေးထှေးမှာ ခါးလေးကော့တကျနသေညျ။“ ပွှတျ….ဖှတျ….ဗွဈ….ဒုတျ….အာ…..အာနိုး…..ငါ…..ငါ…..ဘယျလိုဖွဈ……ဗွဈ…..ဖှတျ…..”“ အငျး…..ထှေး….ထှေး….”အာနိုးဒီလောကျပဲ ပွောလိုကျနိုငျသညျ။ ထှေးထှေး တကိုယျလုံး လူးပြံလာခိုကျ အာနိုးက အသ ကုနျ ငါးခကျြလောကျဆောငျ့ပွီး လီးထိပျမှ အရညျတှကေို တပွှတျပွှတျ ပနျးထုတျပဈလိုကျတော့သညျ။ ထှေးထှေးက သူ့ကိုလှမျး၍အဖကျ အာနိုး တကိုယျလုံးက ထှေးထှေး၏ ကိုယျပျေါသို့မှောကျကသြှားလေ တော့သညျ။“ ကဲ…ဖယျပါအုံး….ဒီမှာ အသကျရှုလို့တောငျ မရဘူး….”ဒီတော့မှ အာနိုးက ထှေးထှေး၏ ကိုယျပျေါမှ ထပွီး လီးကိုပါ စောကျခေါငျးထဲါထဲ ခတျြ လိုကျသညျ။မှ တခှ“ သှား…အပွငျထှကျနေ….ငါ အဝတျတှဝေတျအးမယျ….”ုံ“ နငျ…ခမျြးသေးလား….”
“မသာကောငျ….စကားမမြားနဲ့….အပွငျထှကျနပေါဆို….”အာနိုးသူ့ပုဆိုးကို ကောကျယူ၍ ညောငျပငျအခေါငျးပေါကျကွီးထဲမှ ထှကျလိုကျရသညျ။ စောစော ကတော့ ခံခငျြတိုငျး အလိုးခံနပွေီး ခုမှမိနျးကလေးတှမြေား ရှကျတျောမူနကွေသညျ။ ဒါကို အာနိုးမသိ။ ဘယျလိုလဲဟ ဟူသော အတှေးဖွငျ့သာ စဉျးစားရခကျနသေညျ။ ခဏနတေော့ ထှေးထှကေ အဝတျအ စားစုံလငျစှာဖွငျ့ ညောငျပငျအခေါငျးပေါကျကွီးထဲပွငျသို့ထှကျလာသညျ‘………‘”ကိုယျလုံးလေးလှညျ့ကာ အ“ အာနိုး….နငျ ဒီကို ဘာလာလုပျတာလဲ….” “ ငါ…မှို ခူးမလို့….” အာနိုး ထှေးထှေးမကျြနှာကို ရဲရှဲမကွညျ့ရဲ…ထေးထှေးမှာလညျး ထိုနညျးတူ မကျြနှာလေးအောကျ ငုံ့၍ ပွောနသေညျ။
“နငျ….မှို မခူးရသေးဖူးပေါ့….”“ အငျး….”“ ဒါဆိုရော့….အဝတျယူသှား….”ထှေးထှေးက ညောငျပငျခွရေငျးတှငျခထြားသော ပုခုံးတှငျလှယျရနျကွိုးတပျထားသော တောငျး လေးအပွညျ့မှိုတှကေို နှိုကျပွီး အာနိုးကို လှမျး၍ပေးသညျ။ အာနိုးက သူ့ပုဆိုးခါးပုံစထဲ ထညျ့သညျ။“ ကဲ…အာနိုး….နငျ ပွနျတော့….”“ ငါ နငျ့ ကို လိုကျပို့အုံးမလားလို့….”“ မရှညျနဲပွနျတတျတယျ….နငျ့….ငါ့တဲ ငါပွနျနှငျ့တော့….”အာနိုး လေးလေးပငျပငျနှငျ့ထ၍ ရှာကိုဦးတညျ၍ လြှောကျသညျ။ အာနိုးအတျောဝေးဝေးရောကျ သှားတော့မှ ထှေးထှေးက ညောငျမွဈဆုံကို လကျထောကျ၍ အားယူပွီးထသညျ။ ပွီးတော့ မှိုတှထေညျ့ ထားသော တောငျးလေးကို လှယျလိုကျပွီး လြှကျေလှမျးလိုကျသညျ။ ထှေးထှေးတဈယောကျ လမျး လြှောကျတာ ကှတတနှငျ့ ထော့နငျးထော့နငျးဖွဈနသေညျမဟုတျပါလား။
သူမကိုယျ သူမဒီလိုဖွဈမညျကို ခနျ့မှနျးမိသော ထှေးထှေးက သူမဒီလိုပုံလြှောကျလှမျးတာကို အာ နိုးမွငျတှသှေ့ားမှာစိုး၍ အာနိုးကို အရငျပွနျခိုငျးခ့တာပငျဖွဈတော့သညျ။ဲကိုသနျးငှေ လှတျခငျြတိုငျးလှတျ၍နသေညျ။ ပိုကျတဲမှာစား ပိုကျတဲမှာအိပျသညျ။ မခငျအေး စိတျ ညဈရသညျ။ သူက ယောကျြား အကွောငျးမဟုတျ။ ပိုကျတဲ မှာက မိနျးမတှပေေါသညျ။ မခငျအေးတို့ မိနျးမသားမှာသာ စိတျညဈနရေသညျ။ သနျးငွှပေနျမအိပျတာ ရကျ (၂၀)ကြျောပွီ။ နခေ့ငျးဖကျ ပွနျလာ တတျသျောလညျး ခဏသာ။ အာနိုးကို ခိုငျးစရာ ရှိတာခိုငျး။ သူမကိုလညျး ပွောစရာရှိတာပွောပွီး ပွနျ သှားတတျသညျ။ မခငျအေး စိတျတှေ လနေပွေီ။
သူမ၏ လိုအပျသော ဒုက်ခအတှကျ ဘယျလိုဖွရှေငျးရ မညျမှနျးမသိ။ ရခြေိုးပွီးစ သနပျခါးလိမျးနသေော မခငျအေးတဈယောကျ တှေးမိပွီး စိတျသောကရောကျ နခေိုကျ သူမ၏ ရှမှေ့ မှနျထဲတှငျ အရိပျတဈခု တှလေို့ကျသညျ။ခပျလှမျးလှမျးတှငျထိုငျ၍ နှားနဖားကွိုးအတကျှကွိုးထိုးနသေော အာနိုးက သူမ၏ နောကျကြော ကို ကှကျကွညျ့ကှကျကွညျ့ လုပျနခွေငျးပငျ။ အာနိုးတဈယောကျ ထဘီရငျလြားဖွငျ့ သနပျခါးထိုငျလိမျးနေ သော မခငျအေးကို ခိုးကွောငျခိုးဝှကျကွညျ့ရငျး သူနှငျ့ကိုယျခငျြးရငျးနှီးခဲ့ဖူးသော ထှေးထှေးနှငျ့ နှိုငျးယှဉျ ကွညျ့နမေိသညျ။ထှေးထှေးက သူနှငျ့ သကျတူရှယျတူ အသကျ (၁၅) (၁၆) လောကျသာရှိသညျ။ တောသူတောငျ သား အလုပျကွမျးပါမရှောငျလုပျနကွေရသူမို့ ခန်ဓာကိုယျကတော့ တောငျ့တငျးသနျမာထှားကွိုငျးလှသညျ။
ဒါပမေယျ့ ထှေးထှေး၏ အလှက အပြိုပေါကျ မပွညျ့စုံသေးသောအလှ။ မခငျအေး ဆိုတာက အသကျက အစိတျပတျဝနျးကငျြဆိုတော့ အလှက ပွညျ့စုံနပွေီ။ ပွီးတော့ အိမျထောငျသညျ။ အိမျထောငျသညျဘဝဆို တာ က ယောကျြားနှငျ့ သဟဇာတဖွဈကာ တညျ့လြှငျတညျ့သလို စိုပွလေနျးဆနျး၍ အလှတှတေိုးတတျ တာမြိုး။ ဒီတှော့ မခငျအေး၏ အလှက ထှေးထေး၏ အလှထကျ ပိုသညျ။ အာနိုး၏ အတှေးထဲ့ ဒါမြိုးတှမေရှိ။ အာနိုး စဉျးစားမိသညျက ထှေးထှတှေငျတေားထကျ မခငျအေး က ပို၍ကွညျ့ကောငျးသညျ။ ပွီးတော့ ထှေးထှေးကို ကွညျ့ရ မွငျရ တှရေ့သညျထကျ မခငျအေးကို မွငျရ တှရေ့ ကွညျ့ရသညျက သူ့စိတျတှပေို၍ထလာသညျဟု တှေးမိသညျ။
ဒါပမေယျ့ မစရဲ သူက သူရငျးငှား မခငျအေးက သူရငျးတိုငျ ပွီးတော့ သူ့အပျေါမိဘကဲ့သို့ ကောငျးသညျ။ ဒီတော့ အာနိုးဘာမှမတတျနိုငျ။ ကွညျ့၍သာနရေသညျ။ ကွညျ့တာတောငျ ခိုးကွောငျခိုးဝှကျကွညျ့ရသညျ။ ဗွောငျမကွညျ့ရဲပေ။့မတူဘဲ ငါ့ကို ဘာလို့တမြဲဒီကောငျလေး အရငျကနဲိုးပွောငျးလာရတာလ။ ဟုတျပွီ။ အာနိုးဆိုတာ က ငါ သဆေိုသေ ရှငျဆိုရှငျရမဲ့သူပဲ။ ငါ့ သဘောပဲ။ အာနိုး သူမကိုကွညျ့တာတှရေ့ပွီး မခငျအေး၏ စိတျ တှကေ ပွောငျးလာရသညျ။ ခွထေောကျကိုဆငျး အာနိုးဘကျကို ဘေးခေါငျးပွူ၍ အာနိုးရှိနေ ကွညျ့နေ တာကို မသိခငျြယောငျဆောငျ၍ ထမီကို ပေါငျရငျးထိဆှဲတငျပွီး ခွထေောကျနှဈခြောငျးကို သနပျခါး စိမျ ပွနေပွလေိမျးပဈလိုကျသညျ။
မခငျအေး၏ ဖွူဖှေးတောငျ့တငျးသော ပေါငျတံကွီးတှကေ အာနိုးကို တ ဖကျပွနျမလှညျ့ဘဲ ငေးကွညျ့မိသညျထိ ဖွဈသှားသညျ။ဒါတငျမကသေး မခငျအေးက ရငျလြားထားသော ထဘီကို ဖွတျကနဲ ဖွညျခကြာ ရငျဘတျကို သနပျခါး ကဗြာကယာပှတျတိုကျပေးသညျ။ ကလေးမမေးသေးသော အိမျထောငျသညျ၏ နို့ကွီးတှကေ ဖှေးနု၍ ဖှံ့ထှားတငျးမာလှသညျ။ လှဈကနဲ ခဏတာဖွဈသျောလညျး အာနိုးတဈယောကျ ဖငျကွှပွီး ထရပျ တော့မလိုပငျဖွဈသှ့ ကွာရငျခကျမညျ။ားရသညျ။ ဆကျပွီးတော့လညျး အာနိုးထိုငျပွီး မနခေငျြတောထိုငျရာမှထကာ အိမျဘေးသို့ဆငျးလာခဲ့သညျ။ အိမျဘေးရောကျတောပုဆိုးကိုဖွညျပွီး လီးကိုကွညျ့သညျ။လီးထိပျတှငျ အရလေေးတှကေ စို့နရေုံမြှမက ညောငျစေးတနျးကာပငျ ကနြကွေသေး၏။ဗွုံးကနဲ အာနိုးစိတျထတှငျ ထှေးထှေးကို သတိရလိုကျသညျ။
ဒဲါပမေယျ့ သူခကျြခငျြး ခေါငျးခါ လိုကျသညျ။ မနကေ့ ထှေးထှေးတို့တဲဆီ သူရောကျခဲ့သညျ။ ဘယျသူမှမရှိဘဲ ထှေးထှေးတဈယောကျထဲ သာရှိပမေယျ့ ထှေးထှေးက “ နငျ….ငါ့ ဆီမလာနဲ့အုံးဟာ….မတှခေ့ငျြသေးဘူး ” ဟု သူ့ကို ပွောလိုကျ သညျ မဟုတျပါလား။ အာနိုး စိတျပကျြလကျပကျြဖွငျ့ အိမျဘေးရှိပဉျြခပျြကှဲနသေဖွငျ့ မှောကျထားသော နှားစာခှကျကွီး ပျေါတငျှထိုငျ၍ငိုငျနလေိုကျသညျ။“ အာနိုး ရေ….ထမငျးစားမယျဟေ့…”ဘယျမြှကွာသှားသညျ မသိ။ အိမျပျေါမှ မခငျအေး၏ ချေါသံကွားရမှ အာနိုးဖွတျကနဲ သတိထား မိလိုကျသညျ။ မှောငျရီပြိုးနပွေီ။“ လာပွီ….အမရေ…”ထမငျးစားရနျ အိမျပျေါသို့တကျလာသော အာနိုး အိမျပျေါသို့ရောကျတော့ ထူးဆနျးသောမွငျကှငျး ကို တှလေို့ကျရသညျ။ ပွငျထားသော ထမငျးပှဲ ပွီးတော့ ထမငျးပနျးကနျက နှဈခပျြ။
ခါတိုငျးဆို သူတို့ စား ပွီးမှ အာနိုးက ကိုယျ့ ပနျးကနျကိုယျခူးပွီး စားရသညျ။ အခုတော့….“ လကျဆေးလေ….အာနိုး…..အမနဲ့ အတူတူစားရအောငျ ”မီးဖိုထဲက ဟငျးပနျးကနျကို ကိုငျ၍ထှကျလာသော မခငျအေးကပွောသညျ။ အာနိုး မီးဖိုထဲဝငျ၍ လကျဆေးသညျ။ လကျဆေးပွီး ထမငျးပဲကိုပွနျရောကျတှော့ ထူးဆနျးတာကို ထပျတှရေ့ပွနျသညျ။ တ ဝကျလောကျရှိသော အရကျပုလငျးနှငျ့ ကိုငျးဖနျခှကျတဈလုံး ပွီးတော့ မတျခှကျတဈခှကျနှငျ့ ရကေအ ပွညျ့။“ နငျ ပငျလညျး ပငျပနျးတယျ…ပွီးတော့ မိုးလညျးအေးတယျ….သောကျခငျြရငျ သောကျလိုကျ… အမ… သရကျသီးမှညျ့တှေ လှီးလိုကျအုံပွီးမှ အတူတူ ထမငျးစားကွတာပေါ့….”းမယျ….မခငျအေး မီးဖိုထဲသို့ ပွနျဝငျသှားသညျ။
အာနိုး အကွိုကျတှပွေီ့….ခထြားသော ကွကျသားဟငျး နှငျ့ မွညျးကာ အရကျတဈပိုငျးကို ခဏအတှငျး ကုနျအောငျ သောကျပဈလိုကျသညျ။ သူအရကျသောကျ၍ ပွီးလောကျမှ မခငျအေးက မီးဖိုထဲမှ လှီးထားသော သရကျသီးမှညျ့ပနျးကနျကို ကိုငျပွီးထှကျလာကာ ထမငျးစားပြှဲကျနှာခငျြးဆိုငျကာ စားသညျ။ပျေါတှငျခရြငျး အာနိုးနှငျ့ မအိမျထဲတှငျ ထှနျးထားသော ဘကျထရီမီးရောငျက ပွပွလေး။ မခငျအေး၏ ကိုယျမှ မှေးပြံ့သောရ နံ့တို့က အာနိုး၏ အရကျရှိနျကို တိုးမွှငျ့ပေးနသေယောငျ။ အင်ျကြီမပါသော အာနိုး၏ ကိုယျလုံးကွီးက လညျး မခငျအေး၏ သှေးတို့လှညျ့ပတျမှုကို မွနျဆနျနစေသေညျ။ မခငျအေး က ဟငျးတှတေပွုံကွီးကို အာနိုးပနျးကနျထဲ ခပျထညျ့ပေးပွီး ထမငျးစစားသညျ။
မကျြလှာခထြားရာမှ တခကျြတခကျြ အာနိုးကို ကွညျ့ရငျးစားသညျ။ မခငျအေးက သူ့ကိုကွညျ့၍ စားနခြေိနျတှငျ အာနိုးက မကျြလှာခထြားသညျ။ မခငျအေး မကျြလှာခထြားခြိနျတှငျ အာနိုးက သူမကို ကွညျ့ရငျး ထမငျးစားသညျ။ ထမငျးစားပွီးသှားတော့ အာနိုးက စားပွီးပနျးကနျတှကေို ဆေးရနျထပျသညျ။“ နေ….နေ….အမ ဆေးလိုကျမယျ….မငျး လကျဆေးတော့….ဟိုမှာ အမ ထနျးလကျြနဲ့ ရနှေေး ကွမျးလုပျထားတယျ။ သှားသောကျခြေ။ ပွီးတော့ အင်ျကြီလညျး ဝတျထားအုံး မိုးအေးတယျ….” မခငျအေး အသံက ရှတတလေး။“ ဟုတျကဲ့….အမ…”အာနိုးက အင်ျကြီဝတျပွီး ထနျးလကျြနှငျ့ ရနှေေးကွမျးကို အခြိုတဲသညျ။
ခဏနတေော့ မခငျအေး ကပါ ရောကျလာပွီး အာနိုးဘေးတှငျ ထိမတတျထိုငျကာ ထနျးလကျြဖွငျ့ အခြိုတဲသညျ။“ အာနိုး….နငျ နောကျဖေးက ထငျးတဲမှာ မအိပျနဲ့တော့….အိမျပျေါမှာလာအိပျ….မိုးကောငျးတောငါ တဈယောကျထဲ မနရေဲပွနျလာအိပျမှ နငျဘူး…နငျ့ ဦးလေးကလညျး ရှိတာမဟုတျဘူး….နငျ့ ဦးလေး ထငျးတဲပွနျအိပျပေါ့…..သူ မရှိရငျ အိမျပျေါမှာပဲ လာအိပျ….”“ ဟုတျကဲ့….အမ….”နှဈယောကျသား စကားမဆိုမိကွ။ တဈယောကျခန်ဓာကိုယျကို တဈယောကျခိုးကွညျ့ရငျး အသကျရှု သံတှကေ ပွငျးလာရသညျ။ အတျောလေးကွာတော့မှ မခငျအေး၏ စကားသံက ထှကျလာသညျ။“ အာနိုး….တံခါးတှပေိတျတော့ မိုးရှာလာပွီ….”အာနိုး ထိုငျရာမှထပွီး အိမျတံခါးတှကေို လိုကျပိတျသညျ။
မခငျအေးက အာနိုးကို မကျြစဒေ့ေါကျ ထောကျကွညျ့နသေညျ။ ကွညျ့နသေော သူမ၏ မကျြလုံးမြားက အရောငျတလကျလကျဖွငျ့ ဖွဈသညျ။ တံ ခါးတှပေိတျပွီးသှားတော့ အာနိုးက မခငျအေး၏အနားတှငျ လာထိုငျသညျ။“ နငျ့ အိပျယာခငျးပေးဖို့ အခနျးထဲုံးrနဲခွငျထောငျသှားယူလိုကျအုံးမယျ…..နငျ ဖြာခငျးမှာ ခေါငျးအ့ ထား….ငါ ဘကျထရီမီးယူသှားမယျ….” အာနိုးက ထောငျထားသော သငျဖွူးဖြာလိပျကို ဖွညျ၍ ခငျးသညျ။ မခငျအေးက ဘကျထရီမီး ခြောငျးနှငျ့ ဘကျထရီအိုးကိုယူပွီး အတှငျးဖကျရှိ သူမတို့၏ အိပျခနျးထဲဝငျသှားသညျ။ မကွာမှီတှငျ အိပျ ခနျးထဲမှ မခငျအေး၏ အသံက ထှကျလာသညျ။“ အာနိုးရေ….ဒီမှာ လာယူဟေ့…”“ လာပွီ…အမ…”အာနိုး မခငျအေးတို့လငျမယား အိပျခနျးထဲသို့ဝငျသှားသညျ။
အခနျးထဲတှငျ ဘကျထရီမီးက လငျး နသေညျ။ သူရောကျသှ့ မခငျအေးက ပုဆဈတုတျထိုငျရငျး သူတို့၏ နှဈယောကျအိပျမှယေ့ာကွီားးတောအောကျမှ ဖြာကိုလှနျ၍ ကွမျးပွငျကို ငုံ့၍ကွညျ့နသေညျ။ အာနိုးဖကျကို နောကျကြောပေးထားသော မခငျ အေး ဖငျဆုံကွီးက အယျ၍ လုံးတဈနသေညျ။ ဒါကို နောကျမှကွညျ့ရငျး စောစောထဲက မခငျအေးနှငျ့ နေ ရငျး တထောငျထောငျဖွဈနသေညျ့ အာနိုး၏ လီးက ပိုပွီး မာကွောတငျးထောငျလာသညျ။“ အာနိုး ခဏ….ဒီမှာ ပုရှကျဆိတျတှလေား မသိဘူး…” အာနိုး မခငျအေး၏ အနားကို တိုးကပျသှားပွီး ကားအယျနသေော ဖငျကွီးကို အနီးကပျကွညျ့ရငျး ရငျတှေ တဒိနျးဒိနျးခုနျလာသညျ။“ ဒီမှာဟ….”“ အမလေး….”ဒီမှာဟ ဆိုပွီး အာနိုးကိုမကွညျ့ဘဲ နောကျပွနျလကျဖွငျ့ ပုတျလိုကျသော မခငျအေး၏ လကျက တောငျမတျနသေော အာနိုး၏လီးကွီးကို ခပျဆတျဆတျရိုကျမိသညျ။
“အမလေး…” ဆိုပွီး ဗွုံးကနဲ လနျ့လညျးလနျ့ နာလညျးနာသှားသော အာနိုးက လီးကိုပုဆိုးပျေါမှအုပျကိုငျလိုကျရငျး ကိုယျက နောကျသို့ ယို့သှားသညျ။“ ဟငျ…ဘာဖွဈသားလှဲ….”မခငျအေး ခကျြခငျြးလှညျ့ကွညျ့ပွီး အာနိုး၏ လကျတဖကျကို ဆှဲပွီးပွောသညျ။“ ဟို….ဟို…..အမ….”“ တခုခုဖွဈသှားရငျခကျမယျ….အိပျယာပျေါလှဲလိုကျ….အမ ကွညျ့ပေးမယျ….”မခငျအေးက အာနိုး၏ လီးနရောကို ကွညျ့၍ပွောသညျ။ မခငျအေး၏ နှာသီးဖြားတဈခုလုံး နီမွနျး နသေညျကို ဘကျထရီမီးရောငျအောကျတှငျ ထငျထငျရှားရှားမွငျနရေသညျ။ အာနိုးက သူမကို ကွောငျ၍ ကွညျ့နသေညျ။“ ကဲ….လှဲမှာ လှဲစမျးပါဟာ….”မခငျအေးက လကျကိုဆှဲ့ ကွီးပျေါသို့၍ အတငျးလှဲခိုငျးတောအာနိုးက နှဈယောကျအိပျမှယေ့ာပကျလကျလှဲခလြိုကျသညျ။
အာနိုး၏ ဘေးသို့ မခငျအေး ဒူးထောကျ၍ထိုငျခလြိုကျပွီး အာနိုး၏ ပုဆိုးကို ကှငျးလုံးကြှဲတျထှကျသှားအောငျ ခွဖြေားမှနေ၍ ဆှခတျြပဈလိုကျသညျ။ ထောငျးကနဲ ထှကျလာသော အာ နိုး၏ လီးက အသကျသာငယျသျောလညျး သိပျပွီးတေှာ့ မဟုတျလှပေ။သေးသေးကှေးကေးတောကိုသနျးငှကွေီးကို ငေးစိုကျကွညျ့၏ လီးလောကျ မကွီးပမေယျ့လညျး စံခြိနျတော့မှီသညျဟု မခငျအေး လီးရငျး တှေးမိလိုကျသညျ။ အာနိုး မကျြနှာကို လှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့ သူမလီးကွီးကို စိတျဝငျတစား ငေးစိုကျ ကွညျ့နသေညျအား သူက ကွညျ့နသေညျ။ မခငျအေး ရှကျသလိုဖွဈသှားသညျ။“ အာနိုး….နငျ့ မကျြလုံးတှေ မှိတျထား….”ပွောသညျ့အတိုငျး အာနိုးက မကျြလုံးကို ခကျြခငျြးမှိတျလိုကျသညျ။ မခငျအေး ပွုံးလိုကျပွီး တောငျမတျနသေော လီးကွီးဆီသို့ သူမ၏ လကျတဖကျဖွငျ့ ကတုံကယငျ လှမျးဆုတျလိုကျသညျ။
အာနိုး ဆတျကနဲ ဖွဈသှားသညျ။ မခငျအေး တံတှေးတခကျြကွိတျ၍ မြိုခလြိုကျသညျ။ ပွီးတော့ လီးကွီးကို ခပျဖှ ဖှလေး ပှတျပေးရငျး မရိုးမရှဖွဈလာကာ ကနျလကျတဖကျဖွငျ့ အောကျမှ ဂှေးဥမဲကွီးကို ဖှဖှလြေးမဲလုံးလုံးဆုတျပေးသညျ။ ဒီလိုအယုအယ အကိုငျအတှယျမြိုး အာနိုး တဈခါမှ မခံစားဖူးခဲ့ မကျြလုံးနှဈလုံးကို မှိတျရငျး အ သာမှိနျးနသေညျ။ ထောငျမတျနသေော လီးတနျကွီးက ထိပျဝတှငျ နှီးတပွားလောကျ အရခှေံလနျနေ သညျ။ မခငျအေး လီးပျေါမှ အရခှေံကို အောကျသို့ခပျဖွေးဖွေးဆှခရြငျး ထှကျလာသော လီးထိပျနီနီကွီး ကိဲုကွညျ့ကာ မရိုးမရွှဖဈလာကာ နှုတျခမျးကို ကိုကျလိုကျမိသညျ။
မခငျအေး လီးဒဈကို ဆုတျကိုငျလိုကျ ရငျးက လကျမဖွငျ့ လီးခေါငျးကွီးကို ဖှဖှလေးဖိ၍ ပှတျလိုကျသညျ။ပေါငျနှဈဖကျကို ဟလိုကျရာမှ အာနိုးကော့တကျသှားသညျ။ လကျတဖကျက လီးကိုပှတျပေးရငျး မခငျအေး၏ ကနျြလကျတဖကျက ကွှကျသားအမွှောငျးလိုကျထနသေော အာနိုး၏ ပေါငျတံကွီးကို မခငျြ့မ ရဲဖွငျ့ လိုကျဆုတျနသေညျ။ အုံမထူသေးသျောလညျး သနျစှမျးလှသညျ့ လမှေးမြားကို လကျခြောငျးလေး တှဖွေငျ့ ထိုးဖှလိုကျသေးသညျ။ လီးကွီးက မခငျအေး၏ လကျထဲတှငျ စောစောကထကျ သိသိသာသာ ကွီး မာကွော၍လာရုံမြှမက လီးထိပျတှငျ အရညျကွညျလေးတှေ စို့လာသညျ။ အရိုငျးလေးကို စိတျပါလာ အောငျ မနညျးလုပျရမညျဟု ထငျထားသော မခငျအေး ပြျောသှားသညျ။“ နာသေးလား….ဘယျ…ဘယျလိုနသေေးလဲ…”“ မနာတော့ဘူး….ကောငျး….တယျ….”မခငျအေး ပွုံးလိုကျမိသညျ။
“ အမလေး….”“ ဟငျ….အမ…ဘာဖွဈတာလ…”ဲအရသာရှိနခေိုကျ မခငျအေး က အလနျ့တကွား ကိုယျလုံးကိုခါလိုကျသဖွငျ့ လနျ့သှားသော အာနိုး ထ၍ ထိုငျလိုကျသညျ။“ ပုရှကျဆိတျတှေ….ပုရှကျဆိတျတှေ…”ပွောရငျး မခငျအေးက သူမ၏ အကြ င်္ှီတှကေို ခတျြပဈလိုကျသညျ။ “ ပှတျပေးစမျးပါဟ…..ပုရှကျဆိတျတှေ တကျနတေယျ…” မခငျအေး၏ကိုယျလုံးဖွူဖွူလေးကိုလကျတဖကျဖွငျ့လှမျးဖကျလိုကျပွီးအာနိုးက အကြ င်္ီကြှတျသှား သော မခငျအေး၏ အပျေါပိုငျးကို လကျဖဝါးဖွငျ့ပှတျပေး၏။ ပှတျရငျး နို့နှဈလုံးကို ကိုငျမိလိုကျရငျး ဘာကို မှမစဉျးစားတော့ဘဲ နို့ကိုငုံ့၍ စုပျတော့သညျ။ မခငျအေး ရငျဘတျကို ကော့ပေးရငျး နို့စို့နသေော အာနိုး၏ လညျပငျးကို လကျတဖကျဖွငျ့ဖကျရငျး အာနိုး၏ ခေါငျးကို သူမ၏ ရငျဘတျသို့ဖိကပျပေးထားသညျ။
အာနိုး နို့တဈလုံးပွီး တဈလုံးစို့သညျ။ ပွီးတော့ လကျကထိုငျထားသော မခငျအေး၏ ဖငျဆုံကွီးတှကေို လှမျး၍ ကိုငျကာ ညှဈလိုကျသေးသညျ။ မခငျအေးတဈယောကျ အပြိုမလေးသဖှယျ အသားလေးတှေ တဆတျ ဆတျတုနျလာသညျ။“ နေ…နအေုံး…အာနိုး….ပုရှကျဆိတျက အောကျကို ဝငျပွနျပွီ….” အာနိုးခေါငျးက သူမ၏ ရငျဘတျမှ ခှာသှားတော့ မခငျအေး ခှဲါးမှ ထဘီကိုဆှခတျြလိုကျပွီး ပကျလကျ လှနျလှဲလိုကျသညျ။ ပေါငျတဈခြောငျးကိုလညျး ထောငျ၍ ကားလိုကျသညျ။“ ပှတျပါဟဲ့….အာနိုးရဲ့….”စိတျထနသေော အာနိုး မခငျအေး၏ အမှေးမဲတှဖေုံးနသေော စောကျဖုတျကွီးကို အတငျးဖိ၍ပှတျ သညျ။ သူရငျးတိုငျနှငျ့ သူရငျးငှားကွားတှငျ ကာထားသော သူတို့နှဈယောကျကွားမှ တံတိုငျးက ကွိုး ပေါကျသှားခပြွေီ။
“အဲ…အ…အဒီထိပျကို ကိုကျသှားတယျ….ဖိပှတျစမျး….”အာနိုးက ပွူးထှကျနသေော စောကျစကေို့ ဖိ၍ ဖိ၍ ပှတျပဈလိုကျသညျ။ မခငျအေး ဆတျကနဲ ဆတျကနဲ ခါသှားရငျး စောကျရညျကွညျတှေ စိမျ့ထှကျလာသညျ။“ အထဲ….အထဲကိုဝငျသှားပွီ….လကျခလယျနဲ့ ထိုးထညျ့ပွီး စမျး…စမျး…”“ ဟုတျပွီ…..ဟုတျပွီ….ဘေးတှကေို လကျထိပျနဲ့ ကျော ကျောပွီးစမျး…..”အာနိုးက စောကျခေါငျးထဲ လကျခလယျထိုးထညျ့ကာ မှပှေတျပှတျရငျး လကျထိပျဖွငျ့ စောကျ ခေါငျးအတှပွီးငျးသားတှကေို ပှတျ၍ ပှတျ၍ စမျးသညျ။ မခငျအေး ကော့ကနဲ ကော့ကနဲ တကျတကျသှားစောကျရညျတှကေ ထပျပွီးစိမျ့ထှကျလာသညျ။ စောကျဖုတျကွီးကလညျး မွငျမကောငျးအောငျ ဖေါငျး၍ ခုံးထလာသညျ။“ တျော….တျောပွီ…”အာနိုးက လကျကို စောကျခေါငျးထဲမှ ထုတျကာ နောကျသို့ ကိုယျကို ယို့လိုကျသညျ။ မခငျအေးက လှဲနရောမှ ဆတျကနဲထိုငျ၍ ဘာမပွော ညာမပွောဖွငျ့ အာနိုးကို ကဈြကဈြပါအောငျဖကျ၍ နမျးသညျ။
ဒီ တော့ အာနိုးက မခငျအေးကို တအားဖကျကာ ပွနျနမျးသညျ။ အာနိုးစိတျတှေ မထိနျးနိုငျတော့။ မခငျအေး ၏ ပခုံးနှဈဖကျကို ကိုငျကာ နောကျသို့ ခပျဖွေးဖွေးတှနျးလှဲသညျ။ မခငျအေးက ရုနျးသညျ။“ အာ…အာနိုး….အကြ င်္ီခတျြလိုကျ….”ှအာနိုး အင်ျကြီကို အမွနျခတျြလိုကျသညျ။ နှဈယောကျစလုံး ဝတျလဈစလဈဖွဈသှားသညျ။ မခငျအေှးအာနိုးကို လှမျးဖကျလိုကျပွီး ဖုထဈနသေော ရငျအုံကွီးကို နှုတျခမျးဖြားလေးဖွငျ့ စုပျပွီးနမျး သညျ။ ပွီးတော့ အာနိုးကို ဖကျပွီး ပကျလကျလှနျလှဲပေးလိုကျသညျ။မိုးပျေါထောငျနသေော လီးကွီးက တောငျ့တငျးလနျးသဖွငျ့ တဆတျဆတျဖွဈနသေညျ။ လီးထိပျမှအရညျလေးတှကေ ညောငျစေးတနျး၍ကနြပွေီ။ မခငျအေး လီးကွီးကို နှုတျခမျးဖြားလေးဖွငျ့ တဈခကျြနမျး လိုကျရငျး လီးကွီးကို မခငျြ့မရဲဖွငျ့ ညှဈကိုငျရငျး အာနိုးပျေါသို့ ခှတကျသညျ။
ကုနျးကုနျးကှဖွငျ့ စောကျပတျဝတငျ လီးထိပျကိုတရေ့ငျး စောကျစကေို့ လီးထိပျ ဖွငျ့ကှအနအေထှားသုံးလေးခကျြပှပွီးတော့မှ တဖွေးဖွေးခငျြး ထိုငျခရြငျး မခငျအေး၏ မကျြလုံးမြား ကတျလိုကျသေးသညျ။ စငျးကသြှားသညျ။ လီးတဆုံးဝငျသှားသညျနှငျ့ မခငျအေးက ဒူးထောကျခလြိုကျပွီး အာနိုးကို ငုံ့၍ဖကျ ကာ ဖုထဈနသေော ရငျဘတျကွီးပျေါ မကျြနှာအပျရငျး ဖငျကွှ၍ ဆောငျ့၏။“ ဗွဈ…ဗွဈ…ပွှတျ…ဖှတျ….ဗွဈ…ဒုတျ….ပလှတျ….”“ ဟငျး…ဟငျး…အာနိုး ရယျ…”မခငျအေးက တဈခကျြခွငျး ခပျမှနျမှနျဆောငျ့လိုကျ အားမလိုအားမရဖွဈလာခိုကျ ခပျပွငျးပွငျး ခပျ သှကျသှကျဖွငျ့လိုးသညျ။ မခငျအေး ဆောငျ့လိုးတာက ရိုးရိုးမလိုး။ လီးကို စောကျပတျနှုတျခမျးနှဈခုဖွငျ့ အ တငျးညှပျပွီး လိုးသညျ။
မခငျအေးက အအိုဆိုပမေယျ့ အပြိုမ ထှေးထှေး၏ စောကျပတျထကျပိုပွီး အရသာရှိကွောငျး အာနိုး တှေးမိသညျ။ ခငျတှယျစိတျက မခငျအေးကို ပိုသှားသညျ။ ပွီးတော့ စောကျပတျ ဝဖွငျ့ လီးအရငျးဆီးခုံကိုဖိကပျကာ စကောဝိုငျးလှညျ့ပေးလိုကျသေးသညျ။“ အာ….အငျး……မမ……အ…..”အာနိုး ဆတျဆတျခါသှားသညျ။“ ကောငျးရဲ့လား…..ဟငျ…..အာနိုး…..”“ ကောငျးတယျ…..”“ မမလညျး သိပျကောငျးတာပဲ….မောငျလေးရာ…..ကော့ပွီးအောကျကနေ ပွနျဆောငျ့…..ဟုတျပွီ …… ဟုတျပွီ…..အငျး…..ဟငျး……”မခငျအေး တဈခကျြခွငျးမဆောငျ့တော့။ ခပျပွငျးပွငျးဖွငျ့ သှကျသှကျကွီးကို ဆောငျ့နသေညျ။ နှဈ ယောကျစလုံး တရှူးရှူးဖွငျ့ အသကျရှုပွငျးလာရုံမြှမက အပျေါက ဆောငျ့လိုးနသေော မခငျအေး မောလာ သညျ။
ဒါပမေယျ့ သူမ၏ ဆောငျ့လိုးခကျြကို မလြှော့ အံကိုကွိတျ၍ ဝမျးခေါငျးသံ တအငျးအငျးဖွငျ့ ဆောငျ့ လိုးသညျ။ မခငျအေး၏ လကျနှဈဖကျကလညျး မခငျြ့မရဲဖွငျ့ အာနိုး၏ လကျမောငျးအိုးကွီးတှကေို ဖွဈညှဈသညျ။ ရငျဘတျကွီးကို နှုတျခမျးဖွငျ့ စုပျစုပျနမျးရငျး အသကုနျဆောငျ့သညျ။
“ ဗွဈ……ဗွဈ…ပွတျ….ဖှတျ…..ဒုတျ…..ပလှတျ…..ဟ…..အ….ဟငျး….”စောစောက နှူးနှပျတာကွာထားသဖွငျ့ မထိနျးနိုငျတော့ပါ။ နောကျတဈခြီမှ ခပျကွာကွာလေးခံ တော့မညျဟု တှေးရငျး မခငျအေး စိတျကိုလြှော့ကာ အသကုနျဆောငျ့၍ လိုးလိုကျစဉျ အီးကနဲ အီးကနဲ ဖွဈကာ အာနိုး၏ လီးထိပျမှ သုတျရညျမြားပနျးထှကျလာခိုကျ မခငျအေး မှာလညျး စောကျပတျထမှ သုတျဲရညျတှေ ဒလဟော ပနျးထုတျလိုကျကာ အာနိုး၏ ဆီးခုံပျေါသို့ သုတျရညျမြား စီးကလြာပွီး တကတျြှကြှတျစုပျသပျရငျး ပြော့ခကော ကသြှားလတေော့သညျ။
မောင်မညှောင့်နဲ့ မ ဆောင့်မယ် (စ/ဆုံး)
“အာနိုးရေ….ဟေ့ အာနိုး…”“ လာပြီ….အမရေ…”နွားစာစင်းနေသော အာနိုးအိမ်ဘေးမှ မပြေးရုံတမယ်လာခဲ့ပြီး….အိမ်ပေါ်သို့ လှမ်းတက်လိုက်တော့ မခင်အေးနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မိသည်။“ နင့် ဦးလေးလည်း ပိုက်တဲရောက်ရင်ြဲပန်မလာတော့ဘူး…နင့်ပဲခိုင်းရမှာပ…ညနေစောင်းရင် မိုးရွ့ ပြန်လာမယ့်ပုံမပေါ်ဘူားလိမ့်မယ်ထင်တယ်….နင်…နွားတွေသွားသိမ်းချေတော့…နင့် ဦးလေးကတော…..”“ အခုပဲ သွားလိုက်တော့မယ်….အမ….”အာနိုးက အိမ်ရှေ့မျက်နှာစာ သံဇကာတွင်ချိတ်ထားသော ခမောက်ကို ဆွဲပြီး ထွက်သွားဆောင်းသည်။
မခင်အေး အိမ်ပေါက်ဝမှရပ်ကြည့်ရင်း ပြုံးမိသည်။ အာနိုင်းက ဖင်ပေါ့သည်။ သိတတ်သည်။ သည်လိုသူရင်းငှားမျိုးရထားတာ သူ့တို့အဖို့ကံကောင်းလှသည်။ ပြီးတော့ အာနိုးက တစ်ကောင်ကြွက် မခင်အေး ၏ယောက်ျား ကိုသန်းငွေ၏ အဖေ မခင်အေး၏ယောက္ခမအိမ်တွပြီးင် ငယ်ငယ်ထဲက နေလာကိုသန်းငွေ့ သူတို့ဆီလာပြီး သူရင်းငှားလုပ်နေတာဖြစ်သည်။နှင့် မခင်အေး အိမ်ထောင်ကျတောအသက်က (၁၅)နှစ်ခန့်သာရှိသေးသော်လည်း အာနိုးဆိုသော နာမည်ရအောင် သူ့ခန္ဓာကိုယ်က ထွားကြိုင်းလှသည်။ အခု ကိုသန်းငွေနှင့် မခင်အေးတို့ အိမ်ထောင်ကျပြီး (၂)နှစ်ခန့်အတွင်းမှာပင် အာနိုး တော်တော်ထွားလာသည်။
ဒီနှစ်ဆို ထွန်တုံးတောင်နိုင်နေချေပြီ။ မခင်အေးတို့တွင် လယ်ဧက (၂၀)ကျော် ရှိသည်။ လယ်တွေထွန်တုံးပိတ်ကတည်းက မခင်အေး၏ယောက်ျား ကိုသန်းငွေက ပိုက်ထဲသို့ စတဲချနေ သည်။ ဒီနှစ် ချောင်းရိုးတွ့င် လိုင်စင်ရသူက ကိုသန်းငွေ၏ သူငယ်ချင်း။ ဒီတောကိုသန်းငွေ တစ်ယောက် အရက်ပေါ၍ ပုစွန်ရွေ့။ အိမ်မှာက သူ့သူရင်းငှား အာနိုးကိုး ငါးရွေး မိန်းမတွေများသည့် ပိုက်ထဲမှ မပြန်တောယုံကြည်စိတ်ချတာလည်းပါသည်။ သူကိုယ်တိုင်က ပျော်ပျော်ပါးပါးနေတတ်တာလည်း ပါသည် ပေါ့။ကိုသန်းငွေက အသက်(၃၀)ခန့်သာရှိသော်လည်း အာနိုးက ငယ်ငယ်ထဲက အတူနေလာသူမို့ နှုတ်ကျိုးပြီး ဦးလေးဟုသာခေါ်သည်။
မခင်အေးကျတော့ အသက်(၂၇)နှစ်တောင်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမယ့် အမ ဟုသာသူကခေါ်လေသည်။ အိမ်မှ ကွင်းထဲသို့ထွက်သွားသော အာနိုးတစ်ယောက် မြင်ကွင်းထဲမှ ပျောက် သွားတော့မှ မခင်အေးက အိမ်ထဲသို့လှမ်းဝင်ရန် ကြံလိုက်ရင်း ကောင်းကင်သို့မော့၍ ကြည့်လိုက်မိသည်။ တောင်ဘက်ဆီမှ မိုးရိပ်တို့က တက်စပြုနေပြီ။ သူမ အာနိုးကိုလွှတ်လိုက်သည်မှာ မှန်သွားသည်ဟုတွေး ရင်း မခင်အေးသည် အိမ်ပေါက်ဝသံဇကာတံခါးကိုပိတ်ကာ အိမ်ထဲသို့ပြန်၍ ဝင်ခဲ့လေသည်။ရွာမှနေ၍ကြည့်လျှင် တစ်ပြလောက်အကွာတွင် တောတန်းလေးတစ်ခုရှိသည်။ထိုတောတန်းလေးပတ်လည်တွင် စားကျက်ကောင်းသဖြင့် ရွာမှကျွဲနွားများကို လွှတ်ကြောင်းထားလေ့ရှိသည်။
အခုလည်း အာနိုးတစ်ယောက် ထိုတောတန်းလေးသို့ ရှေ့ရှု၍ လယ်ကွင်းများကိုဖြတ်ကာ လျှောက်လာခဲ့၏။ “ ဟောဟိုရှေ့မှာ….ဒီဖက်ပြန်လာနေကြတာ….အိမ်က ကောင်တွေလားမသိဘူး….” လမ်းခုလတ်အရောက် နွားတစ်စုပြန်လာနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ “ ဟုတ်တာပေါ့….အိမ်ကကောင်တွေပဲ…” ထိုအခိုက် မိုးကတဖြောက်ဖြောက်ကျလာသည်။ နွားသိမ်းဖို့တော့ မလိုတော့ဘူး။ မနေ့ကဦးလေး ကိုသန်းငြွေပြီးခူးလိုက်အုံးမှပ….ဲမှိုစားချင်တယ်ပြောတယ်…။ ကုံတုန်း သွားအာနိုးတစ်ယောက် ရှေ့တွင်မဝေးတော့သော တောတန်းလေးဆီသို့ဆက်၍လာခဲ့သည်။ ထိုအ ခိုက် မိုးကသည်းထန်စွာရွဲပြီးတောလာသည်။
အာနိုးတောတန်းလေးသို့ အရောက်လာခ့သည်။့ သူမိုးခို နေကျ ညောင်ခေါင်းပေါက်ကြီး ရှိရာသို့ အပြေးအလွှားလာခဲ့သည်။ မိုးက တမိုးလုံးမဲမှောင်ပြီး သဲသထက် သဲလာသည်။“ ဟင်…ငါ့ အရင် ဘယ်သူရောက်နေတာလဲ….”ညောင်ပင်အခေါင်းပေါက်ကြီးရှိရာသို့ လှမ်း၍အမြင်ရတွင် လူတစ်ယောက် ငုတ်တုတ်လေးထိုင်နေ သည်ကို မိုးထဲလေထဲတွင် မသဲမကွဲ့မြင်လိုက်ရသည်။တွေ“ ဟင်…..ထွေးထွေး….” “ ဟင်….အာနိုး….” “ နင်….ဘာလာလုပ်တာလဲ….” “ ငါ မှိုလာခူးတာ….မိုးတွေဲသဲလာလို့ မပြန်နိုင်တော့တာ….ဒီမှာတကိုယ်လုံးလည်း ရွနေပြီဟာ…. ချမ်းလိုက်တာ ” ထွေးထွေးက မေးရိုက်သံလေးဖြင့် ပြောသည်။ ထွေးထွေးတို့တဲက တောတန်းလေးနှင့် ရွာအကြား ကွင်းထဲတွင်ရှိသည်။
တောတန်းလေးမှဆိုလျှင် တခေါ်လောက်သာဝေးသည်။“ အီး….ဟီး….ချမ်းလိုက်တာ အာနိုးရာ…”ထွေးထွေး တကိုယ်လုံး ခိုက်ခိုက်တုန်နေသည်။ အာနိုး ထွေးထွေးကို သေချာကြည့်လိုက်သည်။ တကိုယ်လုံးရွဲရွစိုနေ၍ အဝတ်အစားများက တကိုယ်လုံး ကိုယ်တွင် ကပ်နေသည်။ ထွေးထေးမှာ သူမ၏ လုံးလုံးတစ်တစ် ချစ်စရာကိုယ်လုံးလေးမှာ အတိုင်းသားလှပလျက်ရှိသည်။“ အား….ဟီး….ဟီး….လုပ်….လုပ်ပါအုံး….အာနိုးရ….ငါ…ငါ…ချမ်းလိုက်တာ…..အီး….ဟီး….”အာနိုး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ…ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်နေသည်။“ နင့် အဝတ်တွေချွတ်ပြီး ညှစ် လိုက်ရင်ကောင်းမယ်….” “ ဟာ…..နင်…..နင် ကလဲ…”
ထိုအခိုက် လေကလည်း ကြမ်းလာသည်။ “ အာ…နိုး…အမလေး….ဟီး…ဟီး….ချမ်းလိုက်တာ….လုပ်….လုပ်ပါအုံး….” မထူးတော့ပြီ“ ကဲ….နင် မျက်စိတွေ မှိတ်ထားလိုက်….”ထွေးထွေးကလည်း ဘာမှစဉ်းစားမနေတော့….မျက်လုံးအစုံကို မှိတ်ချလိုက်သည်။ အာနိုး ထွေးထွေး၏ အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်သည်။ အဝတ်တွေရေညှစ်ရင်း အဝတ်အစားတေအားလုံးကျတ် သွားသော ထွေးထွေးကို ကြည့်ကာ အာနိုးတစ်ယောက် စိတ်တွေဖောက်ပြန်လာသည်။ ထွေးထွေး၏ ထိပ် ကလေးတွေ နီနေသော နို့လေးနှစ်လုံးက လိမ္မော်သီးခပ်ရွပြီးတော့ ထွေးထွေယ်ရွယ်လေးတွေလောက်ရှိ၏။း၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှ စိမ်းမြမြ အမွှေးလေးတွေနှင့် တောင်ပူစာခုံးခုံးလေး….နှုတ်ခမ်း နှစ်ခုက စေ့ကပ်၍ တင်းနေသည်။
“ဟင်း….ဟင်း….ချမ်း….ချမ်းသေးတယ်….”“ ငါ…ငါ…ဖက်ထားမယ်….”အာနိုး ထွေးထွေးကို ဘေးမှထိုင်၍ ဖက်လိုက်သည်။ ဗလကောင်းသော အာနိုး၏ ရင်ခွင်ထဲတွင် ထွေးထွေး၏ ကိုယ်လုံးလေးမှာ ပျောက်လုမတတ်ဖြစ်နေ၏။ အသားချင်းထိလိုက်ရတော့ အာနိုး၏ သွေး တွေက ဆူသထက်ဆူပွက်လာသည်။ အာနိုး၏ ရင်ခွ့ ထွေးထွေးမှာ ချမ်းတာတော့င်ထဲရောက်သားတောနည်းနည်းသက်သာသွားသည်။ ဒါပေမယ့် အာနိုး၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှ အချောင်းကြီးက သူမ၏ ပေါင်ရင်း တွင် တင်ကာ ဆီးခုံကို ကန့်လန့်ဖြတ်ထိ၍နေသည်။ ယားတတ်သော ထွေးထွေိဖြစ်နေ၏။ ခး ယားကျိကျဏအကြာ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ထွေးထွေးတစ်ယောက် ဒီအချောင်းကြီးကို ပို၍ထိချင်သည့်သဘောဖြင့် သူမ၏ ခါးလေးကို ပို၍ဖိကပ်ပေးမိသည်။
အတွေ့အာရုံက နှစ်ယောက်စလုံးကို တနေရာတည်းတွင် ထိန်း ချုပ်ထားလိုက်ပြီ။“ ထွေးထွေး….ချမ်းသေးလား….”“ အင်း….နည်းနည်းတော့ ချမ်းသေးတယ်….”အာနိုး ထွေးထွေးကို ပြင်ဖက်ရန်အတွက် ကိုယ်ချင်းခွာလိုက်ရာမှ ငုံ့ကြည့်မိလိုက်တော့ ထွေးထွေး၏ ကိုယ်လုံးအရွေဖြစ်သားသော နို့လေးနှစ်လုံးက အာနိုး၏ မျက်လုံးထဲမှနေ၍ ခန္ဓာကိုယ်တ့ လှုပ်ကနွဲင်း ထွိဝင်၍သွားသည်။ အာနိုး သတိလက်လွတ်ဖြစ်ကာ ထွေးထွေး၏ နို့လေးတစ်လုံး ကို ငုံ့၍စို့ပစ်လိုက် သည်။“ အာ…..နင်…..နင်….ဘာ….ဘာလုပ်….”ပြောသာပြောသည်…ထွေးထွေးက မရုန်းဖယ်…သူမပြောလိုက်ကာမှ အာနိုးက ပို၍ဖိစုပ်လိုက် သည်။“ အာ….ဟေ့….အ….”ထွေးထွေးရင်ဘတ်လေးကော့တက်သွားသည်။ စောစောက ချမ်းတာတွေ ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိဘဲ တကိုယ်လုံးဖြိုးဖြိုးဖျင်းဖျင်းဖြစ်ကာ တဖြေးဖြေးနှုံးကျလာသည်။ အာနိုးကလည်း ခေသူမဟုတ်ပါ။
လက်တွေ့မရှိပေမဲ့ ရွာလယ်က တိုးလှိုင်တို့ဗွီဒီယိုရုံတွင် သန်းခေါင်လောက်မှပြသည့် နိုင်ငံခြားအပြာကား တွေကို ခဏခဏကြည့်ဖူးထားသူဖြစ်သည်။အာနိုးက သူမ၏နို့လေးနောက်တစ်လုံးကို ပြောင်း၍အစုပ် ထွေးထွေးက အာနိုး၏ကိုယ်လုံးကြီးကို ပြန်ဖက်ထားလိုက်မိသည်။ ပြီးတော့ သူမ၏ ဆီးခုံကိုလာ၍ ထောက်နေသော အာနိုး၏ ဟာကြီးကလည်း တဆတ်ဆတ်ခုံးထနေသည်ကို ထွေးထွေးသတိထားမိသည်။ အပျိုမလေး ထွေးထွေးကလည်း လက်တွေ့ မရှိပေမယ့် အဖေနဲ့အမေတို့ အဝှါပြုကြတာကို မကြည့်ချင်မြင်လျက်သား မကြာခဏတွေ့မြင်ခ့ဖူးသူဖြစ်ဲသည်။အာနိုး ထွေးထွေးကို ပက်လက်လှန်လှဲလိုက်သည်။ ပြီးတွော့ သူ့ပုဆိုးကို ချတ်အချ ထွေးထွေးကပေါင်နှစ်လုံးကို ထောင်လိုက်သည်။
အာနိုး ဒူးထောက်၍ ဝင်ကာ လီးကို နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကြား တေ့၍ဖိချ သည်။“ အမေ့….အီး….အာနိုး….မလုပ်….မလုပ်ပါနဲ့ဟာ….”ပြောနေပေမယ့် ထွေးထွေး၏ပေါင်နှစ်လုံးက ပို၍ကားသားသည်။ တစ်ကြိမ်လည်းမဝင် နှစ်ကြိမ် လည်းမဝင် အာနိုး၏စိတ်တွေက ထရုံမဟုတ် ကြမ်းလာသည်။ ထွေးထွေး၏ စေ့ကပ်နေသော စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကို ဖြဲကာ ဟသွားတော့ လီးကိုတေ့ပြီး အတင်းဖိချလိုက်သည်။“ ဗြစ်….ဗြစ်….အမလေး….သေပါပြီ…အင့်….အီး….ဟီး….”နာလွန်း၍ ထွေးထွေးငိုချလိုက်သည်။ သူမ၏ အသားလေးတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်။ နှစ်ယောက်စလုံး မသိသည့်အချက်ကတော့ ထွေးထွေး၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းအောက်စပ်လေး တစ် လက်မလောက် ကွဲပြီး သွေးတွေထွက်လာသည်။
ဒါတင်မဟုတ် ထွေးထွေသွားး၏ စောက်ခေါင်းထဲမှ လည်း သွေးလေးတွေစီး၍ ထွက်လာသည်။ တကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ်တုန်ကာ ငိုနေသော ထွေးထွေးကြောင့် အာနိုးတစ်ယောက် ဘာလုပ်ရ မှန်းမသိအောင် ဖြစ်သွားသည်။ ထွေးထွေကြီးကို ဖိကပ်း၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ တဆုံးဝင်နေသော လီးထားလိုက်ပြီး ထွေးထွေး၏ ကိုယ်လေးကို ငုံ့၍ ဖက်ထားလိုက်သည်။ ခဏတာငြိမ်ပြီးနေလိုက်တော့ နာကျင်တာတွေပြီး ပူနွေးတောင့်တင်းသန်မာလှသော လီးကြီး၏အတွေ့က ပို၍လာသည်။လျော့သွားအာနိုးမှာလည်း တဆုံးမြှုပ်နှံထားသော လီးကြီးကို ပတ်လည်ကြပ်ညပ်၍နေသော စောက်ပတ် သားနုနုလေးများက ဝိုင်းဝန်းဆုတ်နယ်ပေးသလို ဖြစ်လာသောကြောင့် မရိုးမရွဖြင့် မနေနိုင်ဖြစ်လာပြီး လီး ကြီးကို ဆွဲဆွဲထုတ်ပြီးဆောင့်သည်။
“ ဗြစ်….ဗြစ်….ပလွတ်….ဖွတ်…..အမေ့…..အား…..အမေ့….”ထွေးထွေး၏ ကိုယ်လုံးလေး တသိမ့်သိမ့်ဖြစ်နေသည် ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသေး၍ အာနိုးက လီးကို တဆုံးထုတ်၍ မဆောင့်ဘဲ လက်နှစ်လုံးလောက် တဝက်လောက် ထုတ် ထုတ်ပြီးဆောင့်သည်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် လီးကရှေ့တိုးနောက်ငင်ဖြင့် ရွေ့လျားနေလေတော့ လီးချောင်းကြီးတစ်ခုလုံးက စောက်ပတ်အ တွင်းသားလေးတွေကို တောက်လျှောက်ပွတ်တိုက်၍နေသဖြင့် နှစ်ယောက်စလုံးအရသာထူးနေကြသည်။ကိုယ်လုံးလေးတသိမ့်သိမ့်ဖြစ်ကာ ရှေ့တိုးနောက်ငင်ဖြင့် တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတော့ ခန္ဓာကိုယ် အ ပေါ်ယံမှ နို့အုံလေးနှစ်လုံးက ယမ်းခါ၍နေသည်။
လုပ်ရမှန်းသိ၍တော့မဟုတ် အာနိုးကထွေးထွေး၏ နို့အုံ နှစ်ဖက်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် လှမ်းဆွဲသည်။ နို့သီးရဲရဲလေးတွေကို လက်ညှိုးလက်မတို့ဖြင့် ညှပ်ကြည့် သည်။ အဆောင့်ကလည်း မပျက်ပေ။ ဘယ်အရာနှင့်မျှမတူအောင် အရသာထူးနေသူက ထွေးထွေပြင်းကြားကး။ တဟင်းဟင်း အသက်ရှုသံပြင်း တွေ့ချင်ဇောဖြင့် အာနိုးကို မျက်လုံးလေး ဖွင့် ဖွင့်ကြည့်ပြီး မျက်လုံးလေးလည်ကာ ပြန်မှိတ် မှိတ်သွားသည်။ ခံစားရခက်လာတော့ ထွေးထွေးတစ်ယောက် ခါးလေးကော့ကော့တက်လာသည်။ လီးကို တဝက်လောက် တဝက်လောက် ထုတ် ထုတ်ပြီး ဆောင့်နေရတာ အာနိုး စိတ်ထဲသိပ်ပြီး အားမရချင်တော့ ပေ။အာနိုးတကိုယ်လုံးလည်း ဆိမ့်၍ အရသာရှိလှသည်။ အာနိုး သူ့လီးချောင်းကြီးကို အဆုံးနီးပါး ထုတ်၍ ဆောင့်သည်။
ထိုသို့ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း ထွေးထွေးမှာ ခါးလေးကော့တက်နေသည်။“ ပြွတ်….ဖွတ်….ဗြစ်….ဒုတ်….အာ…..အာနိုး…..ငါ…..ငါ…..ဘယ်လိုဖြစ်……ဗြစ်…..ဖွတ်…..”“ အင်း…..ထွေး….ထွေး….”အာနိုးဒီလောက်ပဲ ပြောလိုက်နိုင်သည်။ ထွေးထွေး တကိုယ်လုံး လူးပျံလာခိုက် အာနိုးက အသ ကုန် ငါးချက်လောက်ဆောင့်ပြီး လီးထိပ်မှ အရည်တွေကို တပြွတ်ပြွတ် ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တော့သည်။ ထွေးထွေးက သူ့ကိုလှမ်း၍အဖက် အာနိုး တကိုယ်လုံးက ထွေးထွေး၏ ကိုယ်ပေါ်သို့မှောက်ကျသွားလေ တော့သည်။“ ကဲ…ဖယ်ပါအုံး….ဒီမှာ အသက်ရှုလို့တောင် မရဘူး….”ဒီတော့မှ အာနိုးက ထွေးထွေး၏ ကိုယ်ပေါ်မှ ထပြီး လီးကိုပါ စောက်ခေါင်းထဲါထဲ ချတ် လိုက်သည်။မှ တခွ“ သွား…အပြင်ထွက်နေ….ငါ အဝတ်တွေဝတ်အးမယ်….”ုံ“ နင်…ချမ်းသေးလား….”
“မသာကောင်….စကားမများနဲ့….အပြင်ထွက်နေပါဆို….”အာနိုးသူ့ပုဆိုးကို ကောက်ယူ၍ ညောင်ပင်အခေါင်းပေါက်ကြီးထဲမှ ထွက်လိုက်ရသည်။ စောစော ကတော့ ခံချင်တိုင်း အလိုးခံနေပြီး ခုမှမိန်းကလေးတွေများ ရှက်တော်မူနေကြသည်။ ဒါကို အာနိုးမသိ။ ဘယ်လိုလဲဟ ဟူသော အတွေးဖြင့်သာ စဉ်းစားရခက်နေသည်။ ခဏနေတော့ ထွေးထွေက အဝတ်အ စားစုံလင်စွာဖြင့် ညောင်ပင်အခေါင်းပေါက်ကြီးထဲပြင်သို့ထွက်လာသည်‘………‘”ကိုယ်လုံးလေးလှည့်ကာ အ“ အာနိုး….နင် ဒီကို ဘာလာလုပ်တာလဲ….” “ ငါ…မှို ခူးမလို့….” အာနိုး ထွေးထွေးမျက်နှာကို ရဲရွဲမကြည့်ရဲ…ထေးထွေးမှာလည်း ထိုနည်းတူ မျက်နှာလေးအောက် ငုံ့၍ ပြောနေသည်။
“နင်….မှို မခူးရသေးဖူးပေါ့….”“ အင်း….”“ ဒါဆိုရော့….အဝတ်ယူသွား….”ထွေးထွေးက ညောင်ပင်ခြေရင်းတွင်ချထားသော ပုခုံးတွင်လွယ်ရန်ကြိုးတပ်ထားသော တောင်း လေးအပြည့်မှိုတွေကို နှိုက်ပြီး အာနိုးကို လှမ်း၍ပေးသည်။ အာနိုးက သူ့ပုဆိုးခါးပုံစထဲ ထည့်သည်။“ ကဲ…အာနိုး….နင် ပြန်တော့….”“ ငါ နင့် ကို လိုက်ပို့အုံးမလားလို့….”“ မရှည်နဲပြန်တတ်တယ်….နင့်….ငါ့တဲ ငါပြန်နှင့်တော့….”အာနိုး လေးလေးပင်ပင်နှင့်ထ၍ ရွာကိုဦးတည်၍ လျှောက်သည်။ အာနိုးအတော်ဝေးဝေးရောက် သွားတော့မှ ထွေးထွေးက ညောင်မြစ်ဆုံကို လက်ထောက်၍ အားယူပြီးထသည်။ ပြီးတော့ မှိုတွေထည့် ထားသော တောင်းလေးကို လွယ်လိုက်ပြီး လျှေက်လှမ်းလိုက်သည်။ ထွေးထွေးတစ်ယောက် လမ်း လျှောက်တာ ကွတတနှင့် ထော့နင်းထော့နင်းဖြစ်နေသည်မဟုတ်ပါလား။
သူမကိုယ် သူမဒီလိုဖြစ်မည်ကို ခန့်မှန်းမိသော ထွေးထွေးက သူမဒီလိုပုံလျှောက်လှမ်းတာကို အာ နိုးမြင်တွေ့သွားမှာစိုး၍ အာနိုးကို အရင်ပြန်ခိုင်းခ့တာပင်ဖြစ်တော့သည်။ဲကိုသန်းငွေ လွတ်ချင်တိုင်းလွတ်၍နေသည်။ ပိုက်တဲမှာစား ပိုက်တဲမှာအိပ်သည်။ မခင်အေး စိတ် ညစ်ရသည်။ သူက ယောက်ျား အကြောင်းမဟုတ်။ ပိုက်တဲ မှာက မိန်းမတွေပေါသည်။ မခင်အေးတို့ မိန်းမသားမှာသာ စိတ်ညစ်နေရသည်။ သန်းငြွေပန်မအိပ်တာ ရက် (၂၀)ကျော်ပြီ။ နေ့ခင်းဖက် ပြန်လာ တတ်သော်လည်း ခဏသာ။ အာနိုးကို ခိုင်းစရာ ရှိတာခိုင်း။ သူမကိုလည်း ပြောစရာရှိတာပြောပြီး ပြန် သွားတတ်သည်။ မခင်အေး စိတ်တွေ လေနေပြီ။
သူမ၏ လိုအပ်သော ဒုက္ခအတွက် ဘယ်လိုဖြေရှင်းရ မည်မှန်းမသိ။ ရေချိုးပြီးစ သနပ်ခါးလိမ်းနေသော မခင်အေးတစ်ယောက် တွေးမိပြီး စိတ်သောကရောက် နေခိုက် သူမ၏ ရှေ့မှ မှန်ထဲတွင် အရိပ်တစ်ခု တွေ့လိုက်သည်။ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင်ထိုင်၍ နွားနဖားကြိုးအတက်ွကြိုးထိုးနေသော အာနိုးက သူမ၏ နောက်ကျော ကို ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့် လုပ်နေခြင်းပင်။ အာနိုးတစ်ယောက် ထဘီရင်လျားဖြင့် သနပ်ခါးထိုင်လိမ်းနေ သော မခင်အေးကို ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြည့်ရင်း သူနှင့်ကိုယ်ချင်းရင်းနှီးခဲ့ဖူးသော ထွေးထွေးနှင့် နှိုင်းယှဉ် ကြည့်နေမိသည်။ထွေးထွေးက သူနှင့် သက်တူရွယ်တူ အသက် (၁၅) (၁၆) လောက်သာရှိသည်။ တောသူတောင် သား အလုပ်ကြမ်းပါမရှောင်လုပ်နေကြရသူမို့ ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ တောင့်တင်းသန်မာထွားကြိုင်းလှသည်။
ဒါပေမယ့် ထွေးထွေး၏ အလှက အပျိုပေါက် မပြည့်စုံသေးသောအလှ။ မခင်အေး ဆိုတာက အသက်က အစိတ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ အလှက ပြည့်စုံနေပြီ။ ပြီးတော့ အိမ်ထောင်သည်။ အိမ်ထောင်သည်ဘဝဆို တာ က ယောက်ျားနှင့် သဟဇာတဖြစ်ကာ တည့်လျှင်တည့်သလို စိုပြေလန်းဆန်း၍ အလှတွေတိုးတတ် တာမျိုး။ ဒီတွော့ မခင်အေး၏ အလှက ထွေးထေး၏ အလှထက် ပိုသည်။ အာနိုး၏ အတွေးထဲ့ ဒါမျိုးတွေမရှိ။ အာနိုး စဉ်းစားမိသည်က ထွေးထွေတွင်တေားထက် မခင်အေး က ပို၍ကြည့်ကောင်းသည်။ ပြီးတော့ ထွေးထွေးကို ကြည့်ရ မြင်ရ တွေ့ရသည်ထက် မခင်အေးကို မြင်ရ တွေ့ရ ကြည့်ရသည်က သူ့စိတ်တွေပို၍ထလာသည်ဟု တွေးမိသည်။
ဒါပေမယ့် မစရဲ သူက သူရင်းငှား မခင်အေးက သူရင်းတိုင် ပြီးတော့ သူ့အပေါ်မိဘကဲ့သို့ ကောင်းသည်။ ဒီတော့ အာနိုးဘာမှမတတ်နိုင်။ ကြည့်၍သာနေရသည်။ ကြည့်တာတောင် ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြည့်ရသည်။ ဗြောင်မကြည့်ရဲပေ။့မတူဘဲ ငါ့ကို ဘာလို့တမျဲဒီကောင်လေး အရင်ကနဲိုးပြောင်းလာရတာလ။ ဟုတ်ပြီ။ အာနိုးဆိုတာ က ငါ သေဆိုသေ ရှင်ဆိုရှင်ရမဲ့သူပဲ။ ငါ့ သဘောပဲ။ အာနိုး သူမကိုကြည့်တာတွေ့ရပြီး မခင်အေး၏ စိတ် တွေက ပြောင်းလာရသည်။ ခြေထောက်ကိုဆင်း အာနိုးဘက်ကို ဘေးခေါင်းပြူ၍ အာနိုးရှိနေ ကြည့်နေ တာကို မသိချင်ယောင်ဆောင်၍ ထမီကို ပေါင်ရင်းထိဆွဲတင်ပြီး ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို သနပ်ခါး စိမ် ပြေနပြေလိမ်းပစ်လိုက်သည်။
မခင်အေး၏ ဖြူဖွေးတောင့်တင်းသော ပေါင်တံကြီးတွေက အာနိုးကို တ ဖက်ပြန်မလှည့်ဘဲ ငေးကြည့်မိသည်ထိ ဖြစ်သွားသည်။ဒါတင်မကသေး မခင်အေးက ရင်လျားထားသော ထဘီကို ဖြတ်ကနဲ ဖြည်ချကာ ရင်ဘတ်ကို သနပ်ခါး ကဗျာကယာပွတ်တိုက်ပေးသည်။ ကလေးမမေးသေးသော အိမ်ထောင်သည်၏ နို့ကြီးတွေက ဖွေးနု၍ ဖွံ့ထွားတင်းမာလှသည်။ လှစ်ကနဲ ခဏတာဖြစ်သော်လည်း အာနိုးတစ်ယောက် ဖင်ကြွပြီး ထရပ် တော့မလိုပင်ဖြစ်သွ့ ကြာရင်ခက်မည်။ားရသည်။ ဆက်ပြီးတော့လည်း အာနိုးထိုင်ပြီး မနေချင်တောထိုင်ရာမှထကာ အိမ်ဘေးသို့ဆင်းလာခဲ့သည်။ အိမ်ဘေးရောက်တောပုဆိုးကိုဖြည်ပြီး လီးကိုကြည့်သည်။လီးထိပ်တွင် အရေလေးတွေက စို့နေရုံမျှမက ညောင်စေးတန်းကာပင် ကျနေကြသေး၏။ဗြုံးကနဲ အာနိုးစိတ်ထတွင် ထွေးထွေးကို သတိရလိုက်သည်။
ဒဲါပေမယ့် သူချက်ချင်း ခေါင်းခါ လိုက်သည်။ မနေ့က ထွေးထွေးတို့တဲဆီ သူရောက်ခဲ့သည်။ ဘယ်သူမှမရှိဘဲ ထွေးထွေးတစ်ယောက်ထဲ သာရှိပေမယ့် ထွေးထွေးက “ နင်….ငါ့ ဆီမလာနဲ့အုံးဟာ….မတွေ့ချင်သေးဘူး ” ဟု သူ့ကို ပြောလိုက် သည် မဟုတ်ပါလား။ အာနိုး စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့် အိမ်ဘေးရှိပျဉ်ချပ်ကွဲနေသဖြင့် မှောက်ထားသော နွားစာခွက်ကြီး ပေါ်တင်ွထိုင်၍ငိုင်နေလိုက်သည်။“ အာနိုး ရေ….ထမင်းစားမယ်ဟေ့…”ဘယ်မျှကြာသွားသည် မသိ။ အိမ်ပေါ်မှ မခင်အေး၏ ခေါ်သံကြားရမှ အာနိုးဖြတ်ကနဲ သတိထား မိလိုက်သည်။ မှောင်ရီပျိုးနေပြီ။“ လာပြီ….အမရေ…”ထမင်းစားရန် အိမ်ပေါ်သို့တက်လာသော အာနိုး အိမ်ပေါ်သို့ရောက်တော့ ထူးဆန်းသောမြင်ကွင်း ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ပြင်ထားသော ထမင်းပွဲ ပြီးတော့ ထမင်းပန်းကန်က နှစ်ချပ်။
ခါတိုင်းဆို သူတို့ စား ပြီးမှ အာနိုးက ကိုယ့် ပန်းကန်ကိုယ်ခူးပြီး စားရသည်။ အခုတော့….“ လက်ဆေးလေ….အာနိုး…..အမနဲ့ အတူတူစားရအောင် ”မီးဖိုထဲက ဟင်းပန်းကန်ကို ကိုင်၍ထွက်လာသော မခင်အေးကပြောသည်။ အာနိုး မီးဖိုထဲဝင်၍ လက်ဆေးသည်။ လက်ဆေးပြီး ထမင်းပဲကိုပြန်ရောက်တွော့ ထူးဆန်းတာကို ထပ်တွေ့ရပြန်သည်။ တ ဝက်လောက်ရှိသော အရက်ပုလင်းနှင့် ကိုင်းဖန်ခွက်တစ်လုံး ပြီးတော့ မတ်ခွက်တစ်ခွက်နှင့် ရေကအ ပြည့်။“ နင် ပင်လည်း ပင်ပန်းတယ်…ပြီးတော့ မိုးလည်းအေးတယ်….သောက်ချင်ရင် သောက်လိုက်… အမ… သရက်သီးမှည့်တွေ လှီးလိုက်အုံပြီးမှ အတူတူ ထမင်းစားကြတာပေါ့….”းမယ်….မခင်အေး မီးဖိုထဲသို့ ပြန်ဝင်သွားသည်။
အာနိုး အကြိုက်တွေ့ပြီ….ချထားသော ကြက်သားဟင်း နှင့် မြည်းကာ အရက်တစ်ပိုင်းကို ခဏအတွင်း ကုန်အောင် သောက်ပစ်လိုက်သည်။ သူအရက်သောက်၍ ပြီးလောက်မှ မခင်အေးက မီးဖိုထဲမှ လှီးထားသော သရက်သီးမှည့်ပန်းကန်ကို ကိုင်ပြီးထွက်လာကာ ထမင်းစားပျွဲက်နှာချင်းဆိုင်ကာ စားသည်။ပေါ်တွင်ချရင်း အာနိုးနှင့် မအိမ်ထဲတွင် ထွန်းထားသော ဘက်ထရီမီးရောင်က ပြပြလေး။ မခင်အေး၏ ကိုယ်မှ မွှေးပျံ့သောရ နံ့တို့က အာနိုး၏ အရက်ရှိန်ကို တိုးမြှင့်ပေးနေသယောင်။ အင်္ကျီမပါသော အာနိုး၏ ကိုယ်လုံးကြီးက လည်း မခင်အေး၏ သွေးတို့လှည့်ပတ်မှုကို မြန်ဆန်နေစေသည်။ မခင်အေး က ဟင်းတွေတပြုံကြီးကို အာနိုးပန်းကန်ထဲ ခပ်ထည့်ပေးပြီး ထမင်းစစားသည်။
မျက်လွှာချထားရာမှ တချက်တချက် အာနိုးကို ကြည့်ရင်းစားသည်။ မခင်အေးက သူ့ကိုကြည့်၍ စားနေချိန်တွင် အာနိုးက မျက်လွှာချထားသည်။ မခင်အေး မျက်လွှာချထားချိန်တွင် အာနိုးက သူမကို ကြည့်ရင်း ထမင်းစားသည်။ ထမင်းစားပြီးသွားတော့ အာနိုးက စားပြီးပန်းကန်တွေကို ဆေးရန်ထပ်သည်။“ နေ….နေ….အမ ဆေးလိုက်မယ်….မင်း လက်ဆေးတော့….ဟိုမှာ အမ ထန်းလျက်နဲ့ ရေနွေး ကြမ်းလုပ်ထားတယ်။ သွားသောက်ချေ။ ပြီးတော့ အင်္ကျီလည်း ဝတ်ထားအုံး မိုးအေးတယ်….” မခင်အေး အသံက ရှတတလေး။“ ဟုတ်ကဲ့….အမ…”အာနိုးက အင်္ကျီဝတ်ပြီး ထန်းလျက်နှင့် ရေနွေးကြမ်းကို အချိုတဲသည်။
ခဏနေတော့ မခင်အေး ကပါ ရောက်လာပြီး အာနိုးဘေးတွင် ထိမတတ်ထိုင်ကာ ထန်းလျက်ဖြင့် အချိုတဲသည်။“ အာနိုး….နင် နောက်ဖေးက ထင်းတဲမှာ မအိပ်နဲ့တော့….အိမ်ပေါ်မှာလာအိပ်….မိုးကောင်းတောငါ တစ်ယောက်ထဲ မနေရဲပြန်လာအိပ်မှ နင်ဘူး…နင့် ဦးလေးကလည်း ရှိတာမဟုတ်ဘူး….နင့် ဦးလေး ထင်းတဲပြန်အိပ်ပေါ့…..သူ မရှိရင် အိမ်ပေါ်မှာပဲ လာအိပ်….”“ ဟုတ်ကဲ့….အမ….”နှစ်ယောက်သား စကားမဆိုမိကြ။ တစ်ယောက်ခန္ဓာကိုယ်ကို တစ်ယောက်ခိုးကြည့်ရင်း အသက်ရှု သံတွေက ပြင်းလာရသည်။ အတော်လေးကြာတော့မှ မခင်အေး၏ စကားသံက ထွက်လာသည်။“ အာနိုး….တံခါးတွေပိတ်တော့ မိုးရွာလာပြီ….”အာနိုး ထိုင်ရာမှထပြီး အိမ်တံခါးတွေကို လိုက်ပိတ်သည်။
မခင်အေးက အာနိုးကို မျက်စေ့ဒေါက် ထောက်ကြည့်နေသည်။ ကြည့်နေသော သူမ၏ မျက်လုံးများက အရောင်တလက်လက်ဖြင့် ဖြစ်သည်။ တံ ခါးတွေပိတ်ပြီးသွားတော့ အာနိုးက မခင်အေး၏အနားတွင် လာထိုင်သည်။“ နင့် အိပ်ယာခင်းပေးဖို့ အခန်းထဲုံးrနဲခြင်ထောင်သွားယူလိုက်အုံးမယ်…..နင် ဖျာခင်းမှာ ခေါင်းအ့ ထား….ငါ ဘက်ထရီမီးယူသွားမယ်….” အာနိုးက ထောင်ထားသော သင်ဖြူးဖျာလိပ်ကို ဖြည်၍ ခင်းသည်။ မခင်အေးက ဘက်ထရီမီး ချောင်းနှင့် ဘက်ထရီအိုးကိုယူပြီး အတွင်းဖက်ရှိ သူမတို့၏ အိပ်ခန်းထဲဝင်သွားသည်။ မကြာမှီတွင် အိပ် ခန်းထဲမှ မခင်အေး၏ အသံက ထွက်လာသည်။“ အာနိုးရေ….ဒီမှာ လာယူဟေ့…”“ လာပြီ…အမ…”အာနိုး မခင်အေးတို့လင်မယား အိပ်ခန်းထဲသို့ဝင်သွားသည်။
အခန်းထဲတွင် ဘက်ထရီမီးက လင်း နေသည်။ သူရောက်သွ့ မခင်အေးက ပုဆစ်တုတ်ထိုင်ရင်း သူတို့၏ နှစ်ယောက်အိပ်မွှေ့ယာကြီားးတောအောက်မှ ဖျာကိုလှန်၍ ကြမ်းပြင်ကို ငုံ့၍ကြည့်နေသည်။ အာနိုးဖက်ကို နောက်ကျောပေးထားသော မခင် အေး ဖင်ဆုံကြီးက အယ်၍ လုံးတစ်နေသည်။ ဒါကို နောက်မှကြည့်ရင်း စောစောထဲက မခင်အေးနှင့် နေ ရင်း တထောင်ထောင်ဖြစ်နေသည့် အာနိုး၏ လီးက ပိုပြီး မာကြောတင်းထောင်လာသည်။“ အာနိုး ခဏ….ဒီမှာ ပုရွက်ဆိတ်တွေလား မသိဘူး…” အာနိုး မခင်အေး၏ အနားကို တိုးကပ်သွားပြီး ကားအယ်နေသော ဖင်ကြီးကို အနီးကပ်ကြည့်ရင်း ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်းခုန်လာသည်။“ ဒီမှာဟ….”“ အမလေး….”ဒီမှာဟ ဆိုပြီး အာနိုးကိုမကြည့်ဘဲ နောက်ပြန်လက်ဖြင့် ပုတ်လိုက်သော မခင်အေး၏ လက်က တောင်မတ်နေသော အာနိုး၏လီးကြီးကို ခပ်ဆတ်ဆတ်ရိုက်မိသည်။
“အမလေး…” ဆိုပြီး ဗြုံးကနဲ လန့်လည်းလန့် နာလည်းနာသွားသော အာနိုးက လီးကိုပုဆိုးပေါ်မှအုပ်ကိုင်လိုက်ရင်း ကိုယ်က နောက်သို့ ယို့သွားသည်။“ ဟင်…ဘာဖြစ်သားလွဲ….”မခင်အေး ချက်ချင်းလှည့်ကြည့်ပြီး အာနိုး၏ လက်တဖက်ကို ဆွဲပြီးပြောသည်။“ ဟို….ဟို…..အမ….”“ တခုခုဖြစ်သွားရင်ခက်မယ်….အိပ်ယာပေါ်လှဲလိုက်….အမ ကြည့်ပေးမယ်….”မခင်အေးက အာနိုး၏ လီးနေရာကို ကြည့်၍ပြောသည်။ မခင်အေး၏ နှာသီးဖျားတစ်ခုလုံး နီမြန်း နေသည်ကို ဘက်ထရီမီးရောင်အောက်တွင် ထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေရသည်။ အာနိုးက သူမကို ကြောင်၍ ကြည့်နေသည်။“ ကဲ….လှဲမှာ လှဲစမ်းပါဟာ….”မခင်အေးက လက်ကိုဆွဲ့ ကြီးပေါ်သို့၍ အတင်းလှဲခိုင်းတောအာနိုးက နှစ်ယောက်အိပ်မွေ့ယာပက်လက်လှဲချလိုက်သည်။
အာနိုး၏ ဘေးသို့ မခင်အေး ဒူးထောက်၍ထိုင်ချလိုက်ပြီး အာနိုး၏ ပုဆိုးကို ကွင်းလုံးကျွဲတ်ထွက်သွားအောင် ခြေဖျားမှနေ၍ ဆွချတ်ပစ်လိုက်သည်။ ထောင်းကနဲ ထွက်လာသော အာ နိုး၏ လီးက အသက်သာငယ်သော်လည်း သိပ်ပြီးတေွာ့ မဟုတ်လှပေ။သေးသေးကွေးကေးတောကိုသန်းငွေကြီးကို ငေးစိုက်ကြည့်၏ လီးလောက် မကြီးပေမယ့်လည်း စံချိန်တော့မှီသည်ဟု မခင်အေး လီးရင်း တွေးမိလိုက်သည်။ အာနိုး မျက်နှာကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူမလီးကြီးကို စိတ်ဝင်တစား ငေးစိုက် ကြည့်နေသည်အား သူက ကြည့်နေသည်။ မခင်အေး ရှက်သလိုဖြစ်သွားသည်။“ အာနိုး….နင့် မျက်လုံးတွေ မှိတ်ထား….”ပြောသည့်အတိုင်း အာနိုးက မျက်လုံးကို ချက်ချင်းမှိတ်လိုက်သည်။ မခင်အေး ပြုံးလိုက်ပြီး တောင်မတ်နေသော လီးကြီးဆီသို့ သူမ၏ လက်တဖက်ဖြင့် ကတုံကယင် လှမ်းဆုတ်လိုက်သည်။
အာနိုး ဆတ်ကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ မခင်အေး တံတွေးတချက်ကြိတ်၍ မျိုချလိုက်သည်။ ပြီးတော့ လီးကြီးကို ခပ်ဖွ ဖွလေး ပွတ်ပေးရင်း မရိုးမရွဖြစ်လာကာ ကန်လက်တဖက်ဖြင့် အောက်မှ ဂွေးဥမဲကြီးကို ဖွဖွလျေးမဲလုံးလုံးဆုတ်ပေးသည်။ ဒီလိုအယုအယ အကိုင်အတွယ်မျိုး အာနိုး တစ်ခါမှ မခံစားဖူးခဲ့ မျက်လုံးနှစ်လုံးကို မှိတ်ရင်း အ သာမှိန်းနေသည်။ ထောင်မတ်နေသော လီးတန်ကြီးက ထိပ်ဝတွင် နှီးတပြားလောက် အရေခွံလန်နေ သည်။ မခင်အေး လီးပေါ်မှ အရေခွံကို အောက်သို့ခပ်ဖြေးဖြေးဆွချရင်း ထွက်လာသော လီးထိပ်နီနီကြီး ကိဲုကြည့်ကာ မရိုးမရြွဖစ်လာကာ နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်လိုက်မိသည်။
မခင်အေး လီးဒစ်ကို ဆုတ်ကိုင်လိုက် ရင်းက လက်မဖြင့် လီးခေါင်းကြီးကို ဖွဖွလေးဖိ၍ ပွတ်လိုက်သည်။ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဟလိုက်ရာမှ အာနိုးကော့တက်သွားသည်။ လက်တဖက်က လီးကိုပွတ်ပေးရင်း မခင်အေး၏ ကျန်လက်တဖက်က ကြွက်သားအမြှောင်းလိုက်ထနေသော အာနိုး၏ ပေါင်တံကြီးကို မချင့်မ ရဲဖြင့် လိုက်ဆုတ်နေသည်။ အုံမထူသေးသော်လည်း သန်စွမ်းလှသည့် လမွှေးများကို လက်ချောင်းလေး တွေဖြင့် ထိုးဖွလိုက်သေးသည်။ လီးကြီးက မခင်အေး၏ လက်ထဲတွင် စောစောကထက် သိသိသာသာ ကြီး မာကြော၍လာရုံမျှမက လီးထိပ်တွင် အရည်ကြည်လေးတွေ စို့လာသည်။ အရိုင်းလေးကို စိတ်ပါလာ အောင် မနည်းလုပ်ရမည်ဟု ထင်ထားသော မခင်အေး ပျော်သွားသည်။“ နာသေးလား….ဘယ်…ဘယ်လိုနေသေးလဲ…”“ မနာတော့ဘူး….ကောင်း….တယ်….”မခင်အေး ပြုံးလိုက်မိသည်။
“ အမလေး….”“ ဟင်….အမ…ဘာဖြစ်တာလ…”ဲအရသာရှိနေခိုက် မခင်အေး က အလန့်တကြား ကိုယ်လုံးကိုခါလိုက်သဖြင့် လန့်သွားသော အာနိုး ထ၍ ထိုင်လိုက်သည်။“ ပုရွက်ဆိတ်တွေ….ပုရွက်ဆိတ်တွေ…”ပြောရင်း မခင်အေးက သူမ၏ အကျ င်္ွီတွေကို ချတ်ပစ်လိုက်သည်။ “ ပွတ်ပေးစမ်းပါဟ…..ပုရွက်ဆိတ်တွေ တက်နေတယ်…” မခင်အေး၏ကိုယ်လုံးဖြူဖြူလေးကိုလက်တဖက်ဖြင့်လှမ်းဖက်လိုက်ပြီးအာနိုးက အကျ င်္ီကျွတ်သွား သော မခင်အေး၏ အပေါ်ပိုင်းကို လက်ဖဝါးဖြင့်ပွတ်ပေး၏။ ပွတ်ရင်း နို့နှစ်လုံးကို ကိုင်မိလိုက်ရင်း ဘာကို မှမစဉ်းစားတော့ဘဲ နို့ကိုငုံ့၍ စုပ်တော့သည်။ မခင်အေး ရင်ဘတ်ကို ကော့ပေးရင်း နို့စို့နေသော အာနိုး၏ လည်ပင်းကို လက်တဖက်ဖြင့်ဖက်ရင်း အာနိုး၏ ခေါင်းကို သူမ၏ ရင်ဘတ်သို့ဖိကပ်ပေးထားသည်။
အာနိုး နို့တစ်လုံးပြီး တစ်လုံးစို့သည်။ ပြီးတော့ လက်ကထိုင်ထားသော မခင်အေး၏ ဖင်ဆုံကြီးတွေကို လှမ်း၍ ကိုင်ကာ ညှစ်လိုက်သေးသည်။ မခင်အေးတစ်ယောက် အပျိုမလေးသဖွယ် အသားလေးတွေ တဆတ် ဆတ်တုန်လာသည်။“ နေ…နေအုံး…အာနိုး….ပုရွက်ဆိတ်က အောက်ကို ဝင်ပြန်ပြီ….” အာနိုးခေါင်းက သူမ၏ ရင်ဘတ်မှ ခွာသွားတော့ မခင်အေး ခွဲါးမှ ထဘီကိုဆွချတ်လိုက်ပြီး ပက်လက် လှန်လှဲလိုက်သည်။ ပေါင်တစ်ချောင်းကိုလည်း ထောင်၍ ကားလိုက်သည်။“ ပွတ်ပါဟဲ့….အာနိုးရဲ့….”စိတ်ထနေသော အာနိုး မခင်အေး၏ အမွှေးမဲတွေဖုံးနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို အတင်းဖိ၍ပွတ် သည်။ သူရင်းတိုင်နှင့် သူရင်းငှားကြားတွင် ကာထားသော သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှ တံတိုင်းက ကြိုး ပေါက်သွားချေပြီ။
“အဲ…အ…အဒီထိပ်ကို ကိုက်သွားတယ်….ဖိပွတ်စမ်း….”အာနိုးက ပြူးထွက်နေသော စောက်စေ့ကို ဖိ၍ ဖိ၍ ပွတ်ပစ်လိုက်သည်။ မခင်အေး ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ခါသွားရင်း စောက်ရည်ကြည်တွေ စိမ့်ထွက်လာသည်။“ အထဲ….အထဲကိုဝင်သွားပြီ….လက်ခလယ်နဲ့ ထိုးထည့်ပြီး စမ်း…စမ်း…”“ ဟုတ်ပြီ…..ဟုတ်ပြီ….ဘေးတွေကို လက်ထိပ်နဲ့ ကော် ကော်ပြီးစမ်း…..”အာနိုးက စောက်ခေါင်းထဲ လက်ခလယ်ထိုးထည့်ကာ မွှေပွတ်ပွတ်ရင်း လက်ထိပ်ဖြင့် စောက် ခေါင်းအတွပြီးင်းသားတွေကို ပွတ်၍ ပွတ်၍ စမ်းသည်။ မခင်အေး ကော့ကနဲ ကော့ကနဲ တက်တက်သွားစောက်ရည်တွေက ထပ်ပြီးစိမ့်ထွက်လာသည်။ စောက်ဖုတ်ကြီးကလည်း မြင်မကောင်းအောင် ဖေါင်း၍ ခုံးထလာသည်။“ တော်….တော်ပြီ…”အာနိုးက လက်ကို စောက်ခေါင်းထဲမှ ထုတ်ကာ နောက်သို့ ကိုယ်ကို ယို့လိုက်သည်။ မခင်အေးက လှဲနေရာမှ ဆတ်ကနဲထိုင်၍ ဘာမပြော ညာမပြောဖြင့် အာနိုးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဖက်၍ နမ်းသည်။
ဒီ တော့ အာနိုးက မခင်အေးကို တအားဖက်ကာ ပြန်နမ်းသည်။ အာနိုးစိတ်တွေ မထိန်းနိုင်တော့။ မခင်အေး ၏ ပခုံးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်ကာ နောက်သို့ ခပ်ဖြေးဖြေးတွန်းလှဲသည်။ မခင်အေးက ရုန်းသည်။“ အာ…အာနိုး….အကျ င်္ီချတ်လိုက်….”ွအာနိုး အင်္ကျီကို အမြန်ချတ်လိုက်သည်။ နှစ်ယောက်စလုံး ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်သွားသည်။ မခင်အေွးအာနိုးကို လှမ်းဖက်လိုက်ပြီး ဖုထစ်နေသော ရင်အုံကြီးကို နှုတ်ခမ်းဖျားလေးဖြင့် စုပ်ပြီးနမ်း သည်။ ပြီးတော့ အာနိုးကို ဖက်ပြီး ပက်လက်လှန်လှဲပေးလိုက်သည်။မိုးပေါ်ထောင်နေသော လီးကြီးက တောင့်တင်းလန်းသဖြင့် တဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေသည်။ လီးထိပ်မွှအရည်လေးတွေက ညောင်စေးတန်း၍ကျနေပြီ။ မခင်အေး လီးကြီးကို နှုတ်ခမ်းဖျားလေးဖြင့် တစ်ချက်နမ်း လိုက်ရင်း လီးကြီးကို မချင့်မရဲဖြင့် ညှစ်ကိုင်ရင်း အာနိုးပေါ်သို့ ခွတက်သည်။
ကုန်းကုန်းကွဖြင့် စောက်ပတ်ဝတင် လီးထိပ်ကိုတေ့ရင်း စောက်စေ့ကို လီးထိပ် ဖြင့်ကွအနေအထွားသုံးလေးချက်ပွပြီးတော့မှ တဖြေးဖြေးချင်း ထိုင်ချရင်း မခင်အေး၏ မျက်လုံးများ ကတ်လိုက်သေးသည်။ စင်းကျသွားသည်။ လီးတဆုံးဝင်သွားသည်နှင့် မခင်အေးက ဒူးထောက်ချလိုက်ပြီး အာနိုးကို ငုံ့၍ဖက် ကာ ဖုထစ်နေသော ရင်ဘတ်ကြီးပေါ် မျက်နှာအပ်ရင်း ဖင်ကြွ၍ ဆောင့်၏။“ ဗြစ်…ဗြစ်…ပြွတ်…ဖွတ်….ဗြစ်…ဒုတ်….ပလွတ်….”“ ဟင်း…ဟင်း…အာနိုး ရယ်…”မခင်အေးက တစ်ချက်ခြင်း ခပ်မှန်မှန်ဆောင့်လိုက် အားမလိုအားမရဖြစ်လာခိုက် ခပ်ပြင်းပြင်း ခပ် သွက်သွက်ဖြင့်လိုးသည်။ မခင်အေး ဆောင့်လိုးတာက ရိုးရိုးမလိုး။ လီးကို စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုဖြင့် အ တင်းညှပ်ပြီး လိုးသည်။
မခင်အေးက အအိုဆိုပေမယ့် အပျိုမ ထွေးထွေး၏ စောက်ပတ်ထက်ပိုပြီး အရသာရှိကြောင်း အာနိုး တွေးမိသည်။ ခင်တွယ်စိတ်က မခင်အေးကို ပိုသွားသည်။ ပြီးတော့ စောက်ပတ် ဝဖြင့် လီးအရင်းဆီးခုံကိုဖိကပ်ကာ စကောဝိုင်းလှည့်ပေးလိုက်သေးသည်။“ အာ….အင်း……မမ……အ…..”အာနိုး ဆတ်ဆတ်ခါသွားသည်။“ ကောင်းရဲ့လား…..ဟင်…..အာနိုး…..”“ ကောင်းတယ်…..”“ မမလည်း သိပ်ကောင်းတာပဲ….မောင်လေးရာ…..ကော့ပြီးအောက်ကနေ ပြန်ဆောင့်…..ဟုတ်ပြီ …… ဟုတ်ပြီ…..အင်း…..ဟင်း……”မခင်အေး တစ်ချက်ခြင်းမဆောင့်တော့။ ခပ်ပြင်းပြင်းဖြင့် သွက်သွက်ကြီးကို ဆောင့်နေသည်။ နှစ် ယောက်စလုံး တရှူးရှူးဖြင့် အသက်ရှုပြင်းလာရုံမျှမက အပေါ်က ဆောင့်လိုးနေသော မခင်အေး မောလာ သည်။
ဒါပေမယ့် သူမ၏ ဆောင့်လိုးချက်ကို မလျှော့ အံကိုကြိတ်၍ ဝမ်းခေါင်းသံ တအင်းအင်းဖြင့် ဆောင့် လိုးသည်။ မခင်အေး၏ လက်နှစ်ဖက်ကလည်း မချင့်မရဲဖြင့် အာနိုး၏ လက်မောင်းအိုးကြီးတွေကို ဖြစ်ညှစ်သည်။ ရင်ဘတ်ကြီးကို နှုတ်ခမ်းဖြင့် စုပ်စုပ်နမ်းရင်း အသကုန်ဆောင့်သည်။
“ ဗြစ်……ဗြစ်…ပြတ်….ဖွတ်…..ဒုတ်…..ပလွတ်…..ဟ…..အ….ဟင်း….”စောစောက နှူးနှပ်တာကြာထားသဖြင့် မထိန်းနိုင်တော့ပါ။ နောက်တစ်ချီမှ ခပ်ကြာကြာလေးခံ တော့မည်ဟု တွေးရင်း မခင်အေး စိတ်ကိုလျှော့ကာ အသကုန်ဆောင့်၍ လိုးလိုက်စဉ် အီးကနဲ အီးကနဲ ဖြစ်ကာ အာနိုး၏ လီးထိပ်မှ သုတ်ရည်များပန်းထွက်လာခိုက် မခင်အေး မှာလည်း စောက်ပတ်ထမှ သုတ်ဲရည်တွေ ဒလဟော ပန်းထုတ်လိုက်ကာ အာနိုး၏ ဆီးခုံပေါ်သို့ သုတ်ရည်များ စီးကျလာပြီး တကျတ်ွကျွတ်စုပ်သပ်ရင်း ပျော့ခေကာ ကျသွားလေတော့သည်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged မောငျမညှောငျ့နဲ့ မ ဆောငျ့မယျ